PEACEFUL PA: May 2013
“သင်တို့သည် စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ကင်းလွှတ်ရမည့်အကြောင်း သူတပါး၏အမှု၌ စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကို မပြုကြနှင့်။ သင်တို့သည် အကြင်တရားအတိုင်း သူတပါးကိုစီရင်ကြ၏။ ထိုတရားအတိုင်း စီရင်ခြင်းကိုခံရကြမည်။ အကြင်ချိန် ၊ တင်းပမာဏနှင့် သူတပါးအားပေး၏။ ထိုပမာဏအတိုင်း ကိုယ်ခံရကြမည်။ ကိုယ်မျက်စိ၌ရှိသော တံကျင်ကို မအောက်မေ့ဘဲ ညီအစ်ကိုမျက်စိ၌ ရှိသော ငြောင့်ငယ်ကို အဘယ်ကြောင့် ကြည့်ရှုသနည်း။ ကိုယ်မျက်စိ၌ တံကျင်ရှိလျှက်ပင် ညီအစ်ကိုအား သင်၏မျက်စိ၌ရှိသော ငြောင့်ငယ်ကို ထုတ်ပါရစေဟု အဘယ်သို့ဆိုသနည်း။ လျှို့ဝှက်သောသူ ၊ ကိုယ်မျက်စိ၌ရှိသော တံကျင်ကို ရှေးဦးစွာ ထုတ်ပစ်လော့။ နောက်မှညီအစ်ကို မျက်စိ၌ရှိသော ငြောင့်ငယ်ကို ထုတ်ပစ်ခြင်းငှါ ရှင်းလင်းစွာ မြင်လိမ့်မည်။ ဖြူစင်သောအရာကို ခွေးတို့အားမပေးကြနှင့်။ ပုလဲရတနာတို့ကို ဝက်တို့ရှေ့မှာ မချမထားကြနှင့်။ သို့ပြုလျှင် ထိုအရာတို့ကို ကျော်နင်း၍ သင်တို့ကိုလှည့်လျှက် ကိုက်ဖြတ်ကြလိမ့်မည်။” မဿဲ ၇း၁-၆
ဒီကျမ်းပိုဒ်မှာ ဝေဖန်ရေး (၃) မျိုးအကြောင်း တွေ့ရတယ်။
အငယ် (၁) မှာ “သင်တို့သည် စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ကင်းလွှတ်ရမည့်အကြောင်း သူတပါး၏အမှု၌ စစ်ကြော ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို မပြုကြနှင့်။” “ဖျက်လိုဖျက်ဆီးဝေဖန်ရေး” လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အပြစ်ရှာတဲ့ ဝေဖန်ရေးဖြစ်တယ်။ သူတပါးမှာ အမှားကိုသာ ရှာလေ့ရှိသူဖြစ်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်က ဖျက်ဆီးဖို့ပါ။
အငယ် (၄) ကို“မှားယွင်းသော ဝေဖန်ရေး” လို့ ဆိုချင်တယ်။ ကိုယ့်မျက်လုံးမှာ “တံကျင်” ရှိနေပါလျှက်နဲ့ ညီအစ်ကိုရဲ့ မျက်လုံးက “ငြောင့်” ငယ်ကို ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားသူပါ။ သခင်ယေရှု ပြောစကားအရဆိုရင် အဲဒီလူဟာ အမြင်အားနည်းတဲ့အတွက် ညီအစ်ကိုရဲ့ ငြောင့်ငယ်ကို ထုတ်ယူဖို့ မြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ ကိုယ့်ညီအစ်ကိုကို ကူညီချင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ မျက်လုံးက အမှိုက်ကို ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကိုယ့်မျက်လုံးထဲက ၄x၂ (လေး-နှစ်) သစ်သားချောင်း တစ်ချောင်း ထွက်ကျလာပြီး သူများခေါင်းကို ရိုက်မိသွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
အငယ် (၆) ကို “ပိုင်းခြားနားလည်သော ဝေဖန်ရေး” လို့ဆိုချင်တယ်။ “ဖြူစင်သောအရာကို ခွေးတို့အား မပေးကြနှင့်။ ပုလဲရတနာတို့ကို ဝက်တို့ရှေ့မှာ မချမထားကြနှင့်။ သို့ပြုလျှင် ထိုအရာတို့ကို ကျော်နင်း၍ သင်တို့ကို လှည့်လျှက် ကိုက်ဖြတ်ကြလိမ့်မည်။”
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် လူတစ်ယောက်ကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုရတဲ့အခါ လူတစ်ချို့က “စစ်ကြောစီရင်ခြင်းမခံရဖို့၊ မစီရင်နဲ့ မဝေဖန်နဲ့” လို့ ပြောလာမှာ သေချာတယ်။ ဒီကျမ်းပိုဒ်ကို လူတွေက ခေတ်သစ်ဘုရားမဲ့အယူနဲ့ သောကော၊ ရောကောအယူတွေကို ဆန့်ကျင်တာ မလုပ်ဖို့တောင် သုံးစွဲတတ်ပါတယ်။
ဒီကျမ်းချက်က ဘာကိုမှမဝေဖန်နဲ့လို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ အငယ် (၆) အရ အနည်းဆုံး ၄ မျိုးလောက်တော့ ခွဲထားရမယ်။ “ဖြူစင်သောအရာကို ခွေးတို့အား မပေးကြနှင့်။”လို့ ဆိုရင် ဖြူစင်တဲ့အရာဆိုတာ ဘာလဲ? ခွေးဆိုတာဘာလဲ? ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့ လိုတယ်။ “ပုလဲရတနာတို့ကို ဝက်တို့ရှေ့မှာ မချမထားကြနှင့်။” လို့ ဆိုရင် ပုလဲဆိုတာဘာလဲ? ဝက်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? ဆိုတာ ဝေဖန်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဒါကြောင့် (၄) မျိုးလောက်တော့ ဝေဖန်ဖို့ လိုနေပြီ။ ဒါကို ပိုင်းခြားနားလည်တဲ့ ဝေဖန်ရေးလို့ ဆိုချင်တယ်။
(၁) မှန်ကန်သော ဝေဖန်ရေး THE RIGHT KIND OF CRITICISM
၂ကော ၆း၁၄ မှာ “မယုံကြည်သောသူတို့နှင့် တွဲဘက်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ထမ်းဘိုးကို မထမ်းကြနှင့်။” ၁ယော ၄း၁ မှာ “ချစ်သူတို့၊ ခပ်သိမ်းသော စိတ်ဝိညာဉ်တို့ကို မယုံကြနှင့်။ စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်သည် မစပ်ဆိုင်သည်ကို စုံစမ်းကြလော့။”
မယုံကြည်သူတစ်ယောက်နဲ့ တွဲဘက်ထမ်းဘိုး မထမ်းရဘူးလို့ ကျမ်းစာက အမိန့်ပေးထားတယ်။ ဒါကြောင့် လက်မတွဲရုံမျှမက လူတစ်ယောက်ကို ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကတရားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ဖို့ တာဝန်ရှိလာတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ကျမ်းစာကိုဦးထိပ်ထားတဲ့ ဖန်တယ်မန်တယ်လစ်စ် Fundamentalist ပါ။ အဲဒီအတွက် မရှက်ပါဘူး။ ဟိုတုန်းကတော့ ခေတ်သစ်ဘုရားမဲ့အယူ မောဒယ်လစ်ဇင်း modernism ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ THE SWORD OF THE LORD စာစောင်ကို စဖတ်ရတုန်းက ခေါင်းစီးစာသား- “ခေတ်သစ်အယူ ၊ လောကီဆန်ခြင်းနဲ့ Formalism ဝိနည်း ထုံးဖွဲ့အစွဲတွေကို ဆန့်ကျင်တယ်လို့ တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ “ဒီဆရာ ငါ့လိုဘဲခံယူတယ် ငါလည်း ခေတ်သစ်အယူကို ဆန့်ကျင်တယ်။” လို့တွေးမိတယ်။ အမှန် ကျွန်တော်ထင်တဲ့ ခေတ်သစ်အယူဆိုတာက ဘုရားကျောင်းထဲမှာ နှစ်ခြင်းပေးမယ့် ရေကန်ထားတာ၊ တရားဟောဆရာကို လစာပေးတာ၊ တရားဟောနည်းသိဖို့ ကျမ်းစာကျောင်းတက်တာ၊ အလှဆင်တဲ့ခုံတွေ၊ လျှောက်လမ်းကို ကောဇောခင်းတာတွေ၊ သီချင်းအများကြီး ဆိုတာတွေလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ခေတ်သစ်အယူဆိုတာ ယုံကြည်မှုတစ်မျိုးလို့ မသိခဲ့ဘူး။
ကျမ်းစာကို ဦးထိပ်ထားတဲ့သူ အဓိကတရားတွေ စွဲလမ်းသူ ဖန်တယ်မန်တယ်လစ် Fundamentalist စကားကို ကြားရခါစက အကျယ်ကြီးအော်တဲ့သူကို ပြောတာလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ တချို့သူတွေ အကြီးအကျယ် အော်ကြတာမှန်ပေမယ့် တောရိုင်း တိရိစ္ဆာန် အတော်များများလဲ အော်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သားသမီး လေးယောက်ဆိုရင် Fundamentalist အဓိကတရားကို စွဲလမ်းသူဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခင်ကတည်းက အတော အော်ငိုတတ်ကြတယ်။ အော်, ပြီး တရားဟောလို့သာ Fundamentalist ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အတော်များများ Fundamentalist ဖြစ်နေကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Fundamentalism ဆိုတာ ယုံကြည်မှုတမျိုးပါ။ အပြုအမူနဲ့ မဆိုင်ဘူး။
တစ်ခါက Fundamentalism အကြောင်းကို တရားဟောဆရာတစ်ယောက်နဲ့ ဆွေးနွေးဖူးတယ်။ လူတစ်ယောက် အ ကြောင်း ပြောမိတော့ သူက “အဲဒီလူဟာ Fundamentalist တစ်ယောက်ပါ” လို့ ဆိုတယ်။
“အဲဒီလူ Fundamentalist မှန်း ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ?” လို့ မေးတော့ - “ဆံပင်တိုတိုညှပ်ထားလို့ပါ” လို့ ဖြေတယ်။
“ဆံပင်တိုတိုထားတာနဲ့ Fundamentalist ဖြစ်မသွားဘူး။ တစ်ချို့ထိပ်ပြောင် modernist တွေလဲ ရှိတာပဲ။ ခေါင်းပေါ်မှာရှိတာကြောင့် Fundamentalist ဖြစ်မသွားဘူး။ ခေါင်းထဲမှာ ရှိတာကြောင့် သာဖြစ်ရတာပါ။”
အမျိုးသားတွေ ဆံပင်တိုတိုထားတာ ကျွန်တော် သဘောကျပါတယ်။ ယောကျာင်္းဟာ ယောကျာင်္းနဲ့ တူသင့်သလို၊ မိန်းမဟာ မိန်းမနဲ့ တူရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် Fundamentalism ဆိုတာဟာ ယုံကြည်မှုအယူဝါဒ တစ်မျိုးပါ။ ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိက တရားတွေကို စွဲလန်းသူကို Fundamentalist လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဓိကတရားဆိုတာ တရားကိုယ် ဩဝါဒ၊ မရှိမဖြစ် သမ္မာတရား တမျိုးပါ။ ဒီတရားတွေကို ငြင်းရင် ခရစ်ယာန်ပါလို့ ပြောလို့ မရတဲ့ တရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းပြပါမယ်။ ကျွန်တော်မှာ ၁၉၇၆ ထုတ်ကား တစ်စီးရှိပါတယ်။ ကားတစ်စီးထဲမှာ ရှိသမျှ အရာအားလုံးဟာ ကားသွားလာဖို့အ တွက် မရှိမဖြစ်အရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ- အပိုဘီးဟာ မရှိမဖြစ် မဟုတ်ဘူး။ Fundamental မဟုတ်ဘူး။ အပိုဘီးမပါရင်လည်း မောင်းလို့ရတယ်။ စတီရီယိုရေဒီယိုလည်း အဓိကမကျဘူး။ ရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီရေဒီယိုမပါလည်း မောင်းလို့ရတယ်။ လေအေးစက်လည်း မရှိမဖြစ် မဟုတ်ဘူး။ အဓိကမကျဘူး။ Fundamental မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ မပါလည်းဘဲ ကားမောင်းလို့ ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စက်ဟာ Fundamental ပါ။ အဓိကကျပါတယ်။ စက်ကိုထုတ်ထားရင် ကလေးကစားတဲ့ကား (သို့) သုံးဘီး (သို့) စကိတ်ပြား ဖြစ်သွားမယ်။ စက်ကိုထုတ်လိုက်ရင် ကားသွားစေမယ့် အရာကို ထုတ်လိုက်တာပါပဲ။ စက်က လုံးဝမရှိမဖြစ်ပါ။ စက်ထုတ်ထားရင် အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ လောင်ဆာဆီဟာ Fundamental ပါ။ အဓိကကျတယ်။ လောင်ဆာဆီမပါဘဲ ကားမောင်းလို့မရဘူး။ ကားမပြေးနိုင်ဘူး။ ဘက်ထရီဟာ Fundamental ပါ။ အဓိကကျတယ်။ ဘက်ထရီထုတ်ထားရင် စက်သေသွားမယ်။
ဒီလိုပါပဲ၊ ခရစ်ယာန်တရားမှာလဲ Fundamental အဓိက မရှိမဖြစ် တရားတွေရှိပါတယ်။ ဒီတရားတွေကို ငြင်းပယ်ရင် ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ မဟုတ်တော့ဘူး။
A. အပျိုကညာမှ ဖွားမြင်ခြင်းဟာ အဓိကတရားတစ်ခုပါ။ The Virgin Birth isaFundamental.
ယေရှုခရစ်တော်ဟာ အပျိုကညာကမွေးတဲ့ ဘုရားသားတော်မဟုတ်ရင် ကယ်တင်ရှင်ဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ဘူး။ သာမန်လူလို မွေးဖွားလာရင်၊ သာမန်လူလို အမွေခံ အပြစ်ပါလာမယ်။ ရောမ ၅း၁၂ မှာ “ဤအကြောင်းအရာဟူမူကား၊ အပြစ်တရားသည် တယောက်သောသူ အားဖြင့် ဤလောကသို့ဝင်၍” ၊ ရောမ ၅း၁၉ မှာ “အကြောင်းမူကား၊ တယောက်သောသူသည် နားမထောင်သောအားဖြင့်၊ လူများတို့သည် အပြစ်ရောက်သည်နည်းတူ”၊ သခင်ယေရှုခရစ်ဟာ ဘုရားကမဖြစ်ဘဲ လူကဖြစ်တာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လိုပဲ မွေးလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ အမွေခံ အပြစ်က ပါနေပြီ။ အပြစ်ကြွေးတွေ ရှိနေပြီဆိုရင် အပြစ်သားတွေကိုယ်စား အသေခံပေမယ့် အပြစ်ကင်းသူတယာက် မရှိတော့ဘူးပေါ့။
ဒီစကားကို အလေးအနက်ပြောတာပါ။ သခင်ယေရှုခရစ်သာ အပျိုကညာက မမွေးဘူး။ ဘုရားသားမဟုတ်ဘူးဆိုရင် အားလုံးဟာ သခင်ယေရှုနဲ့အတူ ငရဲသွားရဖို့ပါ။- ခရစ်တော် အပျိုကညာက ဖွားမြင်တယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိက တရားတစ်ခုပါ။ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ်။
ယောဟန် ၈း၂၁၊ ၂၄ တစ်ပိုဒ်မှာ - သခင်ယေရှုက “တဖန်ယေရှုက၊ ငါသည်သွားရမည်။ သင်တို့သည် ငါ့ကို ရှာကြလိမ့်မည်။ ကိုယ်အပြစ်၌လည်း သေကြလိမ့်မည်။ ငါသွားရာအရပ်သို့ သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟု မိန့်တော်မူ၏။- ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ကိုယ်အပြစ်၌ သေကြလိမ့်မည်ဟု ငါဆို၏။ ငါသည် ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကို သင်တို့သည်မယုံလျှင်၊ ကိုယ်အပြစ်၌ သေကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။”
B. သခင်ယေရှု သေခြင်းမှ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်တကွ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာ အဓိကတရားတစ်ခုပါ။
The Physical Resurrection of Jesus From the Dead IsaFundamental.
သခင်ခရစ်တော် ရှင်ပြန်ထမြောက်တာကို ငြင်းတဲ့သူဟာ ကယ်တင်ခြင်း မရဘူး။ ရောမ ၁၀း၉ မှာ “သင်သည် သခင်ယေရှုကို နှုတ်ဖြင့် ဝန်ခံ၍၊ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူပြီဟု စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်လျှင်၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။” ယေရှုခရစ် အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်တာဟာ ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာ တစ်ခုပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို တခြားဘာသာတရားတွေနဲ့ ကွာခြားစေတာက ထမြောက်ခြင်းပါဘဲ။ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ တည်ထောင်သူ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အသက်ရှင်ပြီးတော့ သေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရစ်ယာန်မှာတော့ တည်ထောင်သူဟာ အသက်ရှင်ပြီး သေပေမယ့် သုံးနေ့နဲ့ သုံးညအကြာမှာ သေရာက ထမြောက်ပါတယ်။
မိန်းမငယ်တစ်ယောက်က ခရစ်တော်အကြောင်း ပြောပြတယ်။ ဘုရားမဲ့က “မိန်းကလေး၊ ခရစ်တော်အကြောင်းပဲ ပြောနေတာပဲ။ ခရစ်တော်တွေက အများကြီးကွ။ မင်းက ဘယ်ခရစ်တော်ကို ပြောတာလဲ” လို့ မေးတယ်။
“သေရာက ထမြောက်ရှင်ပြန်တဲ့ ခရစ်တော်ပေါ့” လို့ မိန်းကလေးက ပြန်ဖြေတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းဟာ အဆောက်အဦးတစ်ခုရဲ့ အဓိက ထောင့်ကျောက်လိုပါဘဲ။ ထမြောက်ခြင်းကို ဖျက်ဆီးရင် အဆောက်အဦးတစ်ခုလုံး ပျက်စီးပါလိမ့်မယ်။
C. သခင်ယေရှုကိုယ်စား အသေခံပေးတာဟာ အဓိကတရားတခုပါ။
The Substitutionary Death of Jesus IsaFundamental.
အပြစ်သားတွေရဲ့ အပြစ်ကြွေးကို ဆပ်ပေးဖို့ ယေရှုခရစ်သာ ကားတိုင်မှာ ကိုယ်စားအသေခံမပေးရင် ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာ မရှိဘူး။ ယေရှုခရစ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို ငြင်းပယ်ရင် ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကတရားကို ငြင်းပယ်တာပါ။ ဟေရှာယ ၅၃း ၆ မှာ “ထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသော ငါတို့၏ အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏။” ၂ကော ၅း ၂၁-မှာ “ဘုရားသခင်သည် အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကို ငါတို့အတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူ ဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ထိုသူအားဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်သောသူ ဖြစ်မည့်အကြောင်းတည်း။”
ကယ်တင်ခြင်းတရားက ရှင်းရှင်းကလေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အပြစ်သားတွေပါ။ အပြစ်ကြွေးတင်နေတယ်။ ယေရှုခရစ်က အပြစ်သားမဟုတ်ဘူး။ အပြစ်ကြွေးတွေ ငရဲမှာခံရမယ့်အစား ကားတိုင်မှာ ဝေဒနာခံပြီး အသက်ပေးသွားတယ်။ သူ့ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အားကိုးလိုက်ရင် အကယ်ခံရတယ်။ ငရဲရဲ့ ဒီဘက်ကမ်းမှာ အဆိုးယုတ်ဆုံး သူခိုးတွေကတော့ ယေရှုခရစ်ရဲ့ ကိုယ်စားအသေခံပေးတဲ့ နည်းအစား တခြားလမ်း ကိုရွေးပြီး ကောင်းကင်ကို ခိုးတက်ဖို့ ကြိုးစားချင်တဲ့ ဘာသာရေး သူခိုးတွေပါဘဲ။ လောကမှာ မအောင်မြင်ဆုံး ကိစ္စကတော့ ကားတိုင်ကိုကျော်ပြီး ကယ်တင်ခြင်း ရချင်တဲ့ နည်းတွေပါဘဲ။
D. ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာမယ့်အကြောင်းဟာ အဓိကတရားတခုပါ။
The Second Coming of Christ IsaFundamental.
ခရစ်တော်ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအကြောင်းဟာ ပထမကြွလာခြင်းထက် အကြိမ်ပေါင်း အဆနှစ်ဆယ်လောက် ဓမ္မဟောင်းမှာ ပိုတွေ့ရတယ်။ ရှင်ပေါလုရဲ့ ဩ၀ါဒစာတွေထဲမှာ ရေနှစ်ခြင်းအကြောင်း ၁၃ ကြိမ် တွေ့ရချိန်မှာ ဒုတိယကြွလာခြင်းက အကြိမ် ၅၀ တွေ့ရတယ်။
ယေရှုခရစ်သာ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ကြွမလာရင်၊ ကျမ်းချက် အတော်များများဟာ အမှားတွေ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ယော ၁၄း၃ မှာ “ငါသည်သွား၍- - - တဖန်လာပြန်၍၊ ငါရှိရာအရပ်၌ သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါ သင်တို့ကို ငါ့ထံသို့ သိမ်းဆည်းမည်။” ဖိလိပ္ပိ၃း ၂၀- မှာ “ ငါတို့ကျင့်သော အကျင့်မူကား၊ ကောင်းကင်ဘုံနှင့် စပ်ဆိုင်လျက်ရှိ၏။- ကယ်တင်တော်မူသော အရှင်သခင် ယေရှုခရစ်သည် ကောင်းကင်ဘုံမှ ကြွလာတော်မူမည်ဟု ငါတို့သည် မြော်လင့်လျက်နေကြ၏။” သခင်ယေရှု ပြန်လာဦးမှာပါ။
ရှေးမူမပျက် တရားဟောဆရာကြီးတယောက် ဒုတိယကြွလာခြင်းအကြောင်း တရားတပုဒ်ကို ဟောပါတယ်။ စည်း ဝေးအဆုံးမှာ ခပ်ညံ့ညံ့၊ ခပ်ချာချာ ခေတ်သစ်အယူယူတဲ့ လူငယ်ချာတိတ် တရားဟောဆရာကလေးတယောက်က ဘာမှ အစွမ်းအစ မပြနိုင်ပဲနဲ့ “ဒီအကြောင်းကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာထဲက ဆွဲထုတ်မပြနိုင်ဘူးလို့ ဆရာ့ကို ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်” လို့ ဆိုလာတယ်။
ရှေးမူမပျက် တရားဟောဆရာကြီးက ပြုံးပြလိုက်ပြီး “ဘယ်ဆွဲထုတ် နိုင်မလဲကွာ။ အထဲမှာ အမြဲရှိနေတာပဲ” လို့ ပြန်ပြောတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်းအကြောင်းဟာ အဓိကတရားတခုပါ။
E. ကျမ်းစာတလုံးစီတိုင်းကို မှုတ်သွင်းထားခြင်းဟာ အဓိကတရားတခုပါ။
The Verbal Inspiration of the Bible IsaFundamental.
သမ္မာကျမ်းစာဟာ ဘုရားစကားမဟုတ်ဘူး လို့ဆိုရင် အခြေခံအမြစ်ကို အဖျက်ခံလိုက်ရတာပါ။ ယေရှုခရစ်ဟာ အပျိုကညာမှ ဖွားမြင်တယ်ဆိုတာ ကျမ်းစာပြောပြလို့ပါ။ အပြစ်သားတွေအတွက် ကားတိုင်မှာ ယေရှုခရစ်အသေခံပေးတယ်ဆိုတာ ကျမ်းစာပြောပြလို့ပါ။ ယေရှုခရစ် ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တကွ သေရာက ရှင်ပြန်လာတယ်ဆိုတာ ကျမ်းစာပြောပြလို့ပါ။ ယေရှုခရစ် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လာဦးမယ်ဆိုတာလည်း ကျမ်းစာ ပြောပြလို့ သိရတာပါ။
ကျမ်းစာကိုဖျက်ရင် ခံယူချက်တွေကိုပါ ဖျက်ပစ်တာပါပဲ။ ကျမ်းစာဟာဘုရားစကားပါ။ ဒီအချက်ဟာ အဓိကကျပါတယ်။ ၂တိ ၃း ၁၆ မှာ “ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသော အားဖြင့်ဖြစ်၍” မဿဲ ၄း ၄ “ယေရှုကလည်း၊ လူသည် မုန့်အားဖြင့်သာ အသက်ကို မွေးရမည်မဟုတ်။ ဘုရားမိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်၊ အသက်ကိုမွေးရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။”
ခေတ်သစ်ဘုရားမဲ့သမားတွေက ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားစကား “ပါတယ်” လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းစာဦးထိပ်ထားတဲ့ အဓိကမူလ တရားစွဲလန်းသူတွေက “သမ္မာကျမ်းစာဟာ ဘုရားစကားတော် ဖြစ်တယ်”လို့ ပြောကြတယ်။ တခါတုန်းက၊ ကျမ်းစာဟာ ဘုရားစကားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတဲ့ တရားတစ်ပုဒ်ဟောအပြီးမှာ လူတစ်ယောက်က လာမေးတယ်။ “ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးတော့ ဘုရားစကား မဟုတ်ဘူး”လို့ ဆိုတယ်။
“ဘုရားစကားမဟုတ်တာ ဘယ်အပိုင်းလဲ?” လို့ ကျွန်တော်မေးတယ်။ သူက ကမ္ဘာဦးကျမ်းကို ဖွင့်ဖတ်ပြပြီး၊ မြွေက ဧဝကိုပြောတဲ့စကား “သင်သည် အမှန် သေရလိမ့်မည်မဟုတ်။” အရ “ဒီစကားဟာ ဘုရားစကားမဟုတ်ဘူး။ မာရ်နတ်စကား” လို့ ပြောတယ်။
ကျွန်တော်က “အဲဒါ ဘုရားစကားပါ။ မာရ်နတ်က ဧဝကို “သင်သည် အမှန်သေရလိမ့်မည်မဟုတ်” လို့ ပြောတဲ့အကြောင်း ဘုရားသခင် ပြောတာပါ။ မာရ်နတ်အကြောင်းကို ဘုရားသခင် ပြောနေတာပါ။ ဒီစကားကို မာရ်နတ်ပြောတယ်လို့ ဘုရားသခင်သာ ပြန်မပြောပြရင် သိရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျမ်းစာဟာ ကမ္ဘာဦးကနေ ဗျာဒိတ်အထိ ဘုရားပြောတဲ့ စကားပါ။” တစ်လုံးမကျန် ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်” လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
-သမ္မာကျမ်းစာဟာ ဘုရားရေးတာဘဲဖြစ်ရမယ်၊ လူရေးတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
လူကောင်းတွေဟာ ဟန်ဆောင် ကျမ်းစာ ရေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
ပရောဖက်တွေရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ထက်မြက်ဖို့ရာ
ဘုရားမှုတ်သွင်းတဲ့ စကားပဲ ဖြစ်ရမှာပါ။-
သခင်ယေရှု အပျိုကညာမှ ဖွားမြင်ခြင်း၊ ဝေဒနာခံခြင်း၊ အောင်မြင်စွာ ရှင်ပြန်ခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း၊ ကျမ်းစာလုံးတိုင်းကို မှုတ်သွင်းခြင်းတွေဟာ ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကကျတဲ့တရားများ ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်အသက်ပေးရဲတဲ့အရာ တချို့ရှိတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေအတွက် အသက်မပေးရဲပေမယ့် တိုက်ခိုက်ရဲတယ်။ မတိုက်ခိုက်ရဲပေမယ့် ဒေါသထွက်ပြရဲတဲ့ အရာတချို့ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝိညာဉ်ရေးရာမှာ ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကတရားတွေအတွက် အသက်ပေးရဲပါတယ်။
၂ကော ၆း၁၄ မှာ “မယုံကြည်သောသူတို့နှင့် တွဲဘက်၍ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ထမ်းဘိုးကို မထမ်းကြနှင့်။” ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရှိမရှိကို ခေတ်သစ်အယူယူသူတွေ၊ သောကောရောကောတွေနဲ့ လက်တွဲချင်စိတ်အပေါ် တိုင်းလို့ မရပါဘူး။ ကျမ်းစာရဲ့ အမိန့်တွေ ကို နာခံမှု ရှိမရှိနဲ့ တိုင်းတာရတယ်။ သခင်ယေရှုက ယော ၁၄း၂၃ မှ “ငါကိုချစ်သောသူသည် ငါ့စကားကို နားထောင်လိမ့်မည်။” မယုံကြည်သူတစ်ယောက်နဲ့ လက်မတွဲသင့်ဘူး။ မညီတဲ့ထမ်းဘိုး မထမ်းသင့်ဘူး။ မယုံကြည်သူ၊ ခေတ်သစ်အယူယူသူ၊ သောကောရောကော ဘုရားမဲ့နဲ့ အယူလွဲသူ ဆိုတာတွေဟာ အတူတူတွေပါပဲ။ သောကောရောကောနဲ့ ခေတ်သစ်အယူယူသူတွေဟာ ဘုရားဖွင့်ပြတဲ့ သမ္မာတရားကို အတည်ပေါက် ငြင်းသူတွေပါ။ သခင်ယေရှု အပျိုကညာမှ မွေးတယ်လို့ ကျမ်းစာပြောတာကို သိရဲ့နဲ့ ငြင်းသူပါ။ မသိလို့ မှားတာနဲ့ သမ္မာတရားကိုအတည်ပေါက် ငြင်းပယ်တာဟာ မတူပါဘူး။ မသိလို့ မှားနိုင်ပေမယ့် မသိရုံနဲ့ သောကောရောကော Liberal တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မယုံကြည်သူနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ထမ်းဘိုးကို တွဲထမ်းဖို့ ဆင်ခြေပေးနိုင်တဲ့ တရားဟောဆရာလည်း မရှိနိုင်ပါဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ ဝေဖန်ရေးဆိုတာ ရှိပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့အမြင်၊ သဘောထားဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲက Liberal တွေ ၊ ခေတ် သစ် Modernist တွေ မဖယ်ထုတ်နိုင်ရင် ကိုယ်တိုင်ပဲ ထွက်လိုက်ပါ။
အဓိကတရားတွေကို ခံယူနေသမျှတော့ မိဿဟာယ ဖွဲ့သင့်ပါတယ်။ အဓိကတရားတချက်ကို ငြင်းပယ်လာရင် ကျမ်းစာအမိန့်အတိုင်း ရိုးသားစွာ သူနဲ့ သီးခြားနေဖို့ လိုတယ်။ ခွာနေဖို့လိုတယ်။ တစ်ယောက်က “အဓိကအရာတွေမှာ ညီညွတ်ခြင်း၊ အသေးအမွှားအရာတွေမှာ လွှတ်ခြင်း၊ အရာအားလုံးမှာတော့ ချစ်ခြင်း” လို့ ဆိုပါတယ်။
ရိုးရိုးသားသား ပြောကြစတမ်းဆိုရင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က သိသမျှလူတွေနဲ့ အရာရာတော့ သဘောထား တူမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွှန်တော် ပြောဘူးတဲ့ အရာတချို့တောင် အခု ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တော့ဘူး။ အခုပြန်မဟောချင်တော့တဲ့ တရားမျိုးတွေလည်း ဟောခဲ့ဖူးတယ်။ လူဟာ ဖတ်မှတ်၊ လေ့လာနေမယ်ဆိုရင် သူဟာ ဆက်လက် သင်ယူနေတာ ဖြစ်တယ်။ ဆက်လက်သင်ယူနေရင် တချို့ အကြောင်းအရာတွေမှာ သူ့သဘောထား ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော့သင်းအုပ်ဆရာကြီးက ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တကွ ထမြောက်ခြင်းကို မယုံခဲ့ဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း မယုံခဲ့ဘူး။ ထမြောက်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ ကျမ်းစာဖတ်ပြီး ယောဟန် ၅း၂၈ ၊ ၂၉ ကို ဖတ်မှသိရတယ်။ “ဤအမှုအရာကို အံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်။ သင်္ချိုင်းများမှာ ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည် သားတော်၏ စကားသံကို ကြား၍ ထွက်ရမည့် အချိန်ကာလရောက်လတံ့။” တရားဟောဆရာတစ်ယောက်က မကြာသေးခင်က ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်၊ “အေး- ဘုရားကျေးဇူးတော်ပဲ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၇ -နှစ် လောက်တုန်းက ငါလဲ အဲဒီလိုပဲ” တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ၃၇- နှစ်တွင်း ပြောင်းလဲမှု မရှိတဲ့သူဆိုတာ စုံလင်သူ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းမာတဲ့သူပဲ ဖြစ်ရမယ်။ စုံလင်တဲ့သူ ရှိတယ်လို့တော့ မကြားဖူးဘူး။
ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။ ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်တော်နှစ်နဲ့ချီပြီး မယုံခဲ့မိဘူး။ ဒုတိယကြွ လာခြင်းအကြောင်း တရားတစ်ပုဒ်မှလဲ မကြားဖူးဘူး။ “premillennial”- “အနှစ်တစ်ထောင် မတိုင်ခင်” ဆိုတဲ့စကားကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကြားရတုန်းက မနက်စာ အစားအသောက် တစ်မျိုးလိုပဲ ထင်မိတယ်။
တနင်္ဂနွေည တစ်ညမှာ ဘုရားကျောင်းကို လူတစ်ယောက် လာတက်တယ်။ သူလာတော့ သူ့လက်ထဲမှာ ကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ် ပါတာ သတိထားမိတယ်။ ဘုရားကျောင်းကို ကျမ်းစာအုပ် ပါလာတာဆိုလို့ သူတစ်ယောက်ပဲ ရှိဖူးတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော် လန့်ပါတယ်။ စုံစမ်းဖို့လာတဲ့ သူလျှိုတစ်ယောက်လို့ ထင်သွားတယ်။ အဲဒီညက အချက် ခုနှစ်ချက်ပါတဲ့ တရားတစ်ပုဒ် ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဟောလိုက်တော့တယ်။ အရင်ကဒီလို အချက်တွေနဲ့ မဟောဘူးပါဘူး။ ဗျာဒိတ် အခန်းကြီး ၂နဲ့ ၃ကိုဖတ်ပြီး “အောင်မြင်သောသူသည်” ဆိုတဲ့စကားကို ခဏခဏ တွေ့မိတာနဲ့ ဟောလိုက်တာပါ။ “ဒီညဟောမယ့် တရားက အောင်မြင်သူတွေ အတွက် ဘုရားဂတိတော်များဖြစ်ပါတယ်” လို့ ကြေငြာလိုက်တယ်။
“အောင်မြင်သူကို ကျောက်ဖြူ တစ်တုံးပေးမယ်။ အဲဒီကျောက်ပေါ်မှာ နာမည်သစ်ကို ရေးပေးမယ်။ ကျောက်ဖြူရရှိတဲ့ သူမှတပါး ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး” လို့ ဟောပါတယ်။ စကားတွေ ချဲ့ပြောလိုက်တယ်။ ကျောက်ဖြူတစ်တုံး လို့ ပြောပေမယ့် ဘာဆိုလိုမှန်းတော့ မသိပါဘူး။ “ဟာလေလုယ - ကျောက်ဖြူတစ်တုံး၊ အဲဒီကျောက်ပေါ်မှာ ကျွန်တော့နာမည် ရေးထားမယ်။ ဘယ်သူမှ ခိုးမသွားနိုင်ဘူး။ ဘုရားသခင် ဘုန်းကြီးပါစေ။”လို့ ဟောပါတယ်။ ကျောက်ဖြူတုံးနဲ့ ပတ်သက်သမျှ မကုန်မချင်း ဟောလိုက်တာပါပဲ။
နောက်- “ဒုတိယအချက် အောင်မြင်သူကို ဝှက်ထားတဲ့ မန္နကျွေးမယ်။ ဘုရားသခင်ကို ကောင်းကြီးပေးကြပါ။ မန္နမုန့်ဆိုတာ ဘာလဲတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကင်ရောက်သည်အထိ ရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့၊ အဲဒီမုန့်ဟာ ကောင်းလို့ပဲပေါ့။ ကောင်းကင်ရောက်သည်အထိ မှိုမတက်ဘူး။ ပုတ်သိုး မသွားဘူးပေါ့။ ဝှက်ထားတယ်ဆိုတော့ စာတန်လဲ ရှာမတွေ့ နိုင်ဘူးပေါ့။ ဘုရားသခင် ဘုန်းကြီးပါစေ။” လူတိုင်း မန္နမုန့် စားချင်လာလောက်အောင်ကို ဟောပစ်လိုက်ပါတယ်။
အချက်အလက် အကုန်လုံးဟောပစ်လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးအချက်ရောက်တော့ ဗျာဒိတ် ၃း၂၁ မှာ ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။ “နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အောင်မြင်သူကို ငါ့ပလ္လင်ပေါ်မှာ ငါနဲ့အတူ ထိုင်ခွင့်ပေးမယ်။ ငါ့ခမည်းတော်ရဲ့ ပလ္လင်ဘေးမှာ ထိုင်ခွင့်ရမယ်။” အဲဒါ ဘာပြောချင်မှန်း မသိဘူး။ “ဟ၊ ဒီကျမ်းချက်ကို ဘယ်လိုပြောရမလဲ? သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ပြောချလိုက်တာပေါ့။” လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောမိတယ်။
ပရိသတ်ကို ကြည့်လိုက်တယ်။ “ဒီကျမ်းချက်အရ အခုသခင်ယေရှုဟာ ပလ္လင်ပေါ်မှာ မထိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ထိုင်လိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်းအတူ ထိုင်ရမယ်။ ခမည်းတော်နဲ့အတူ နေရာပေးခံရပါလိမ့်မယ်။” လို့ ဟောတော့ ကျမ်းစာအုပ်ပါလာတဲ့လူက “အာမင်း” လို့ ထအော်တယ်။
“နည်းနည်းလေးသိရုံနဲ့ ဟောတာကောင်းတယ်လို့ ပြောနေပါလား။ ဆက်ဟောရင် ထိထိမိမိရှိလောက်တယ်။” လို့ တွေးမိသွားတယ်။ ဒါနဲ့အသံကျယ်ကျယ် ခပ်မြန်မြန်ကလေးနဲ့- “ဘုရားရှင်ကို ကောင်းကြီးပေးကြ။ ဒီကျမ်းချက်အရ သခင်ယေရှုပလ္လင်ပေါ်မှာ အခုမရှိသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟာလေလုယ တစ်နေ့ပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်လိမ့်မယ်။ ငါတို့လည်းအတူ စိုးစံရမယ်။” လို့ ဟောတော့ အဲဒီလူက “အာမင်း”လို့ ထအော်ပြန်တယ်။
“တွေ့တာလေးဟောရုံနဲ့ ဒီကျမ်းချက်က ကောင်းသားဟ၊ အဲဒီလူလည်း သိသွားပြီ” လို့ တွေးမိတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီအကြောင်းပဲ ထပ်ထပ်ဟောလိုက်တာ အဲဒီလူ “အာမင်း” ပြောဖို့ ရှက်သွားတဲ့ အထိပါဘဲ။ အဲဒီနောက် တရားဟောချက်ကို အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ဝတ်ပြု စည်းဝေးအပြီး “ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ ဆရာ့ကို premillennial တရားဟောဆရာ တစ်ယောက်မှန်း မသိခဲ့ဘူး” လို့ လာပြောတယ်။
“ဘုရားကျောင်းလာတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ ထပ်လာဖို့မြော်လင့်ပါတယ်။” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
သူက “ဆရာသာ premilliennial မှန်းသိရင် အသင်းတော်မှာ ပါဝင်ကူညီမှာပေါ့။” လို့ ပြောပါတယ်။
“နောက်လည်း လာအုံးနော်” လို့ ပြောတော့ သူထွက်မသွားသေးပဲ -
“ဆရာက premillennial နော်၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?”
ကျွန်တော် ခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ “ရှက်လိုက်တာခင်ဗျာ။ ဒီစကား တစ်ခါမှ မကြားဘူးသေးဘူး။ ဘာကိုပြော တာလဲ?” လို့ မေးလိုက်တယ်။
“ဆရာက “postmillennial (အနှစ်တစ်ထောင်ပြီးမှ ) မဟုတ်ဘူး- မဟုတ်လား?”
“ဒီစကားလဲ မကြားဘူး ပြန်ဘူးဗျာ”
“ဟုတ်ပြီ amillennial (အနှစ်တစ်ထောင် မရှိတော့) မဟုတ်ဘူး- မဟုတ်လား?”
“အဲဒီ millennial ဆိုတဲ့စကား ကြားကို မကြားဘူးတာပါဗျာ”
“ဒီညဟောတဲ့အတိုင်းတော့ ယုံကြည်ထားတယ် မဟုတ်လားဆရာ?”
“ဒါဆို ဆရာက premillennial (အနှစ်တစ်ထောင်မတိုင်ခင်) ပေါ့၊ မသိလို့ပဲ” လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီစကား ကောင်းသလား ဆိုးသလားဆိုတာ ကျွန်တော်မသိဘူး။ အရမ်းကို ရှက်သွားတယ်။
ကျွန်တော့ကို လက်တင်မင်္ဂလာပေးတုန်းက ammillennial အုပ်စုတစ်စုက Seofield ကျမ်းစာအုပ်တစ်အုပ် ပေးတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီ ကျမ်းစာအုပ်ကို အဲဒီညက ယူပြီး ပြန်မယ်လုပ်တော့ အဲဒီလူကမြင်သွားတယ်။ ဆရာ့ကျမ်းစာအုပ်ကို ကြည့်ပါရစေ” တဲ့။ သိပ်တော့မကြည့်စေချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူကလည်း ဆက်တောင်းနေတယ်။ ကြည့်ပြီးတော့ “ဒီကျမ်းစာကိုင်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ?” လို့ မေးတယ်။
“၅ နှစ်၊ ၆ နှစ်တော့ ရှိပါပြီ။ လက်တင်ပေးတုန်းက တရားဟောဆရာတချို့ ပေးသွားတာပါ။”
“၆ နှစ်လုံးလုံး ၊ ဒီကျမ်းစာထဲကပဲ ဟောတာပေါ့နော်?”
“ဒါနဲ့များ၊ premillennialist ဆိုတာမသိဘူးလို့ လာပြောနေတယ်ဗျာ”
Seofield ကျမ်းစာရဲ့ အကြောင်းအရာ အညွှန်းကို တခါမှကျွန်တော် မဖတ်ဖူးဘူး။ ကျမ်းညွှန်း Concordance ကို ဘယ်လိုသုံးရမယ် ဆိုတာတောင် မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်လတွေမှာ Seofield ကျမ်းစာက “premillennial” တရားဟောဆရာ ဆိုတာ ဘာကို ပြောသလဲလို့ ကြိုးစားရှာရတော့တယ်။ ကျွန်တော် အတော်ညံ့တာပဲ။ အဓိကတရား fundamentals တွေဆိုတာ ဘာတွေလဲ ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော် ကျင်လည်ဖူးတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက မိတ်သဟာယဖွဲ့ဖို့ စစ်ဆေးရင် “မင်း အဓိကတရားတွေ ယုံသလား?” လို့ မမေးဘူး။ “မင်းခြေဆေးသလား?” ပဲ မေးကြတယ်။
မသိလို့ မှားတာကတမျိုး။ သိသိကြီးနဲ့ သမ္မာတရားကို ငြင်းပယ်တာက တမျိုးပါ။ တရားမဟောခင် စိတ်ကြိုက် သီချင်း ဘယ်လောက် ဆိုကြမယ်ဆိုတာ သဘာထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန် အလှူငွေ ကောက်မလဲ- သဘောထားကွဲနိုင်ပါတယ်။ ဘတ်စ်ကား ထားမလား၊ မထားဘူးလား ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရေးမကြီးတာတွေမှာ ကွဲလွဲခွင့် ရှိသင့်ပေမယ့် တယောက်နဲ့တယောက်တော့ ဆက်ချစ်နေသင့်တယ်။ ဘုရားရဲ့ စစ်သူရဲတွေပါ။ အရေးမကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေမှာ တယောက်နဲ့တယောက် မတိုက်ခိုက်ကြ၊ မသတ်ဖြတ်ကြရင်၊ ခရစ်တော်အတွက် ကမ္ဘာကို လှုပ်ခါ ပစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာတော့ စိတ်ကြိုက်ဟောစရာလေးတွေတော့ ရှိမှာပေါ့။ အဓိကတရားတွေကို ယုံကြည်တဲ့သူတွေ Fundamentalists တွေအတွက် ကျွန်တော် ရပ်တည်နေတာပါ။ အားပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အားမပေးသည်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်အသင့် ရှိပါတယ်။
မကြာသေးခင်က Dr. Roger Voegtlin နဲ့အတူ Fair Haven နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ လူ ၅,၂၅၃ .ယောက် လာတက်တယ်။ မနက်စည်းဝေးမှာ လူ ၅၀၀ ကျော် ပြောင်းလဲတယ်။ သူတို့ကြိုးစားပေးသလောက် ကျွန်တော်လည်း အရယူလိုက်တာပဲ။ ဒီလိုမလုပ်ချင်တဲ့သူ ဖြစ်ပေမယ့် အဓိကတရားတွေကို ယုံကြည်သူဖြစ်ရင်၊ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေဖွဲ့ချင်ပါတယ်။ တချို့ အကြောင်းအရာတွေမှာ ဥာဏ်မျက်စိပွင့်လင်းလာဖို့ ဆုတောင်းပေးပါမယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေတော့ ဖွဲ့ရမှာပါဘဲ။ အပျိုကညာမှ ဖွားမြင်တာ၊ သခင်ယေရှု ဝေဒနာခံပေးတာ၊ ထမြောက်ရှင်ပြန်တာ၊ ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမှာ၊ ကျမ်းစာတစ်လုံးစီ ကို မှုတ်သွင်းတာ … စတာတွေကိုယုံရင်- လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ သတိမထားရင်တော့ သခင်ယေရှုခရစ်ကို သစ္စာရှိတာထက် မိသဟာယတွေ၊ တချုို့အသင်းတော်တွေ၊ ကျောင်းတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာ သစ္စာရှိနေတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ အဓိက,က သခင်ယေရှုခရစ်အပေါ်မှာ သစ္စာအရင်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ကျွန်တော် နှစ်ခြင်းပါ။ ဒါပေမယ့် fundamentalists အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ John Wesley ကောင်းကင်မှာလို့ ကျွန်တော် ယုံတယ်။ သူကောင်းကင်မှာ ဝတ်ရုံဝတ်ထားရင်၊ သူ့ဝတ်ရုံရဲ့ အောက်ပိုင်း ပန်းပွါးလေးတွေ ကျစ်ပေးရင်းနဲ့ အသက်ရေစီးရာမြစ်မှာ သူ့ကို နှစ်ခြင်းပေးချင်တယ်။
အန်ကယ် Buddy Robinson လည်း ကောင်းကင်မှာလို့ ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ အန်ကယ် Buddy ဟာ စကားနည်းတဲ့ နာဇရိလူပါ။ မက်သဒစ်တရားဟောဆရာရဲ့ ဟောပြောမှုကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တာပါ။ စင်ကြယ်မှု ဦးစားပေးတဲ့ “ဒုတိယ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ” ကို ပရက်စ် ဘစ်တီးရီးယန်း တရားဟောဆရာထံကနေ သဘောတရား ရခဲ့ပါတယ်။ ဟိုတုန်းက သူ ဟောတဲ့ တရားတပုဒ် ပြန်နားထောင်ကြည့်ခွင့် ရလိုက်တယ်။ အန်ကယ် Buddy ပြောတဲ့ “ဒုတိယ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ” ဆိုတာ ကျွန်တော် မယုံဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ခံသွားမတတ် ဟောနိုင်တဲ့သူပါ။
အန်ကယ် Bud -က “မျက်စိမမြင်တဲ့လူကို သခင်ယေရှုတို့ထိတော့ “မင်းဘာမြင်လဲ?” တဲ့။
အဲဒီလူက “လူတွေဟာ သစ်ပင်တွေလိုဖြစ်ပြီး လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ မြင်ရပါတယ်” လို့ ဖြေတယ်။
အန်ကယ် Buddy က “အဲဒီလူဟာ “ဒုတိယ ကောင်းကြီး” ကို လိုနေတာပါ” တဲ့။ ဒါနဲ့ သခင်ဘုရားက ဒုတိယအကြိမ် တို့ထိလိုက်တော့ ဒုတိယကောင်းကြီး ပေးလိုက်တော့၊ “မင်း - အခု ဘာမြင်သလဲ?” တဲ့။
အန်ကယ် Buddy က “အဲဒီလူက ရှင်းရှင်း မြင်ရပြီ” လို့ ဖြေတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဒါကို ရှင်းပြပုံက “ပထမကောင်းကြီး ရရုံပဲရှိချိန်မှာ၊ ဂိုဏ်းဂဏခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲ သစ်ပင်အိုကြီးတွေလို မြင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယ ကောင်းကြီးရတော့မှ လူတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရတော့တယ်” တဲ့။
အန်ကယ် Bud ဟာ ဒုတိယကောင်းကြီးအကြောင်း ဟောလွန်းလို့ ၊ လူတယောက်က “Bud - ရေ၊ ဆရာက ဒုတိယကောင်းကြီးပဲ ဟောနေရသလားကွာ။ ကျုပ်တော့ ကောင်းကြီးပေါင်းတထောင် ရနေပြီ” လို့ ပြောရတဲ့အထိပါပဲ။
အန်ကယ် ဘတ်ဒီ က “မင်းမှာ အဲဒီလောက်များနေရင်၊ ငါ့လို အဘိုးအိုကြီးမှာ ၂ -ခုပဲရှိတာကို မဝေမျှဘူးလား?” လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။
တနေ့ အန်ကယ်ဘတ်ဟာ ဆရာဝန်ထံ သွားပြပါတယ်။ “ဒေါက်တာ၊ ဒီနားတစ်ဖက်က မကြားရဘူး”လို့ ပြောတော့၊ ဆရာဝန်က နည်းနည်းစမ်းသပ်ကြည့်ပြီး၊ “အန်ကယ် ဘတ်၊ ဘာမှမဟုတ်ဘူး၊ အသက်ကြီးလို့ပါ” လို့ ပြောတယ်။
ဘတ်ဒီ- က “ငါ ပြောပါဦးမယ်ကွာ။ ငါဖြင့် နားကိုမလည်တော့ဘူး။ ဒီဘက်နားက တလုံးမှ မကြားရဘူး။ ဟိုတဘက်ကတော့ ရှင်းရှင်းကြီး ကြားရတယ်။ အသက်ကြီးလို့ လို့ပြောရင်၊ နားနှစ်ဖက်လုံး တပြိုင်နက်တည်း မွေးလာကြတာပဲကွာ။” လို့ ပြောပါတော့တယ်။ အန်ကယ် ဘတ်ဒီ ဟာ ကောင်းကင်မှာ နေရာကောင်းရမှာပါ။ တွေ့ချင်မြင်ချင်ပါတယ်။
အရာရာတိုင်းတော့ သဘော မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကတရားတွေကို ယုံကြည်ကြရင်တော့ သဘောထား မတူတာတွေလည်း ရှိမှာပေါ့။ အသေးအမွှားတွေကြောင့် မကွဲပြားကြစို့နဲ့။ ကျွန်တော်တော့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ချင်ပါတယ်။ တယောက်နဲ့တ ယောက် မတူကြပေမယ့်၊ သဘောကျတယ်။ ဆုတောင်းပေးနေမယ်။ မှန်ကန်တဲ့ ဝေဖန်ရေးဆိုတာဟာ ခေတ်သစ်အယူယူသူတွေ ၊ မယုံကြည်သူတွေကို ဝေဖန်တာပါ။ သူတို့ထံကနေ သီးခြား ခွဲနေတာပါ။
တခြားအချက်တချက် သတိပြုစရာ ရှိပါသေးတယ်။
၂။ မှားယွင်းတဲ့ ဝေဖန်ရေး THE WRONG KIND OF CRITICISM
အငယ် ၄ - မှာ “ကိုယ်မျက်စိ၌ တံကျင်ရှိလျှက်ပင် ညီအကိုအား၊ သင်၏မျက်စိ၌ ရှိသောငြောင့်ငယ်ကို ထုတ်ပါရစေဟု အဘယ်သို့ ဆိုသနည်း။”
ညီအကို နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ တယောက်ကို ဘုရားသခင်က “လျှို့ဝှက်သောသူ” လို့ ခေါ်ထားတယ်။ သူဟာ ခေါင်းပတ်လည်မှာ ၄/၂ သစ်သားချောင်း တစ်ချောင်း တွဲလောင်းဆွဲထားလျက်နဲ့ သူ့ညီကို “မင်းမျက်စိထဲက အမှိုက်ကလေး ထုတ်ပေးပါရစေ” လို့ ပြောတဲ့သူပါ။
သူက သူ့ညီရဲ့ မျက်စိထဲက အမှိုက်ကို ဘယ်လိုလုပ်မြင်သလဲ? ကျွန်တော်ဖြင့် ဒီနေရာမှာ တမနက်လုံးရှိနေတာ။ ဘယ်သူ့မျက်စိမှာမှ အမှိုက်ဝင်တာ ဖုန်ဝင်တာ မတွေ့မိပါဘူး။ သူများမျက်လုံးမှာ ဖုန်မှုန့်ဝင်တာ မြင်တဲ့သူရှိရင်တော့ အဲဒါ - လိုက်ရှာနေလို့ပဲ ဖြစ်မယ်။ ပြိုးပြိုးပျက်ပျက် အရာလည်းမဟုတ်။ လူကိုဆွဲဆောင်တာလည်း မဟုတ်။ အဲဒီအမှိုက်ကို သူဘယ်လိုလုပ်မြင်သလဲ? သူက ရှာနေတာကိုး။ အပြစ်ရှာရင်၊ အပြစ်တွေ့မှာပေါ့။ ဘယ်သူမှ စုံလင်ကြတာမှ မဟုတ်ဘဲ။
ကျွန်တော် သင်းအုပ်လုပ်တုန်းက၊ လတိုင်း လူရာနဲ့ချီပြီး ကယ်တင်ခြင်းရကြ၊ နှစ်ခြင်းခံကြတာ တွေ့ရတယ်။ တခါတလေ တချို့သူတွေက ဝတ်ပြုစည်းဝေးမှာ အပြစ်ပြောစရာ တွေ့ကြတယ်။ ဧည့်ကြိုတဲ့သူတွေက ရောက်သင့်တဲ့နေရာထိ ထွက်မလာတာမျိုး၊ တယောက်ယောက်ကို စကားမပြောမိတာမျိုး ရှိတတ်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ အဲဒီလူဟာ ပြောင်းလဲသူတွေ၊ သံစုံသီချင်းကောင်းတာတွေ၊ နှစ်ခြင်းခံကြတာတွေ၊ အားလုံးကို မမြင်တော့ဘူး။ ဘာထပ်တွေ့တွေ့၊ မြင်ရမြင်ရ၊ မထူးခြားတော့ဘူး။ အဲဒီလိုလူတွေဟာ အပြစ်ရှာနေသူတွေပါ။
ကိုယ်ရှာတာပဲ ကိုယ်တွေ့ကြမှာပါ။ ရှေးကဗျာလေးရှိတယ်လေ။
ပူစီလေး ၊ ပူစီလေးရေ
ဘယ်ကို ရောက်ခဲ့သလဲ ပြောပါဟေ?
နာရီစင်က အသံမြည်မယ်။ Westminster သင်္ချိုင်းမှာ သန့်ရှင်းသူတွေရဲ့ အုတ်ဂူရှိမယ်။ လန်ဒန်မျှော်စင်နဲ့ Big Ben နာရီစင်၊ နန်းတော်နဲ့ ဘုရင်မရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် ကြောင်ကလေးရောက်သွားတော့ သူဘာမြင်သလဲ? ကြွက်ကလေးတဲ့။ ဘာပြုလို့လဲ? သူက ကြွက်ရှာနေတာကိုး။
ကိုယ်ရှာတာပဲ ကိုယ်တွေ့ပါတယ်။ ရှုခင်းတွေအကြောင်း သိချင်ရင် လင်းတ တကောင်ကို မလွှတ်ပါနဲ့။ ပျံဝဲသွားပေမယ့် အလှအပတွေ၊ သာယာတဲ့ ရေကန်တွေ၊ ပန်းတွေဝေနေတဲ့ သစ်ပင်တွေ၊ စိမ်းလန်းဝေဆာနေတာတွေ၊ မြက်ခင်းပြင်တွေ၊ အဆုပ်- အဆုပ် စုဝေးနေတဲ့ အဖြူရောင် တိမ်တိုက်တွေနဲ့ တခြားအလှအပ ရှုမြော်ခင်းတွေကို သူမမြင်ဘူး။ ပြန်ရောက်တဲ့အခါ “ဘာမြင်ခဲ့ရသလဲ?”လို့ မေးကြည့်။ လင်းတက “လောက်တွယ်နေတဲ့ နွားသေတစ်ကောင် တွေ့ခဲ့တယ်” လို့ ဖြေပါလိမ့်မယ်။ သူ့စကားက သူ့သဘာဝကို ပြနေတယ်။ သူက လင်းတပါ။
ဒီလိုလူတွေ တွေဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့ အသင်းသားတွေထဲမှာလည်း အများကြီးရှိတယ်။ အကောင်းမမြင်တတ်ဘူး။ အပြစ်ပဲ ရှာတတ်တယ်။
အမှိုက် ဘာလို့တွေ့လဲ? အမှိုက်ရှာလို့ပေါ့။ ဘာလို့ အမှိုက်ရှာသလဲ? တခါတလေမှာ မနာလိုလို့ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ သူမှာ အပြစ်ရှာတွေ့တတ်ပါတယ်။ မနာလိုတော့ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ပက်ကြပါရော။ ၀ိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်း မလုပ်တဲ့သူက လုပ်တဲ့ဆရာကို ဝေဖန်ပါလိမ့်မယ်။ တခြားသူကို တစစီဖြစ်အောင် ဆွဲချလိုက်ရင် ၊ ကိုယ့်အလုပ် အောင်မြင်မယ်လို့ ထင်တတ်ကြလို့လည်း တခါတရံ အပြစ်ရှာ တတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတပါးအိမ်ကို ဖျက်ရုံနဲ့ ကိုယ့်အိမ်ဆောက်ရလေ့ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ တရားဟောဆရာတစ်ယောက်က ကိုယ့်အခြေအနေ မြင့်ဖို့အတွက် တခြားတရားဟောဆရာကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားတာဟာ ဝမ်းနည်းစရာပါ။ ကိုယ်စိတ်ကြေနပ်ဖို့အတွက် ညီအကိုရဲ့ မျက်စိမှာ အမှိုက်ရှာတာမျိုးလည်း ရှိတတ်တယ်။ ကိုယ့်အပြစ်တော့ ကိုယ်သိနေကြ တော့ သူတပါးအပြစ်ရှာတွေ့မှ နေကောင်းတတ်တာတွေလည်း ရှိတယ်။
ဥပမာ - ကျွန်တော် ကင်ဆာရောဂါနဲ့သေမယ်ဆိုရင် - ဒီရောဂါနဲ့ပဲသေမယ့် တခြားလူတသောင်းကို ရှာလည်း ဘာထူးလာမှာလဲ?
ညီအကိုမျက်စိမှာ အမှိုက်ရှာရင်၊ ကိုယ်အဖြစ်မှန် ကိုယ်မသိတော့ဘူး။ သူ့မျက်စိမှာ ၄/၂ သစ်သားချောင်းတချောင်း ရှိနေပြီ။ သူ့ခေါင်းကို သစ်သားချောင်းနဲ့ ထောက်ထားနေပြီ။ သူတပါးမျက်စိမှာ အမှိုက်ရှာနေပြီ။ သနားစရာမကောင်းဘူးဆိုရင်တောင်- ရယ်စရာတော့ ကောင်းနေပြီ။ သူတပါးမျက်စိမှာ အမှိုက်ရှာ သိပ်မကျွမ်းကြပါနဲ့။ ကိုယ်မျက်စိမှာ သစ်သားချောင်းတစ်ချောင်း ရှိသလားပဲ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ရှာပါ။ ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ ဝေဖန်ရေးပါပဲ။ သောကောရောကောတွေ ၊ ခေတ်သစ်အယူယူသူတွေကို တိုက်ခိုက်ပါ။ ဆန့်ကျင်ပြီး သီးခြား ရပ်တည်ပါ။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကတရားတွေကို ခံယူယုံကြည်ရင် အသေးအမွှားတွေ ရှိရင်လည်း ရှိခွင့်ပေးပါ။ လက်တွဲပါ။
Dr. Bob Jones, Sr. က ပြောဖူးတယ်။ “အမဲလိုက်ခွေးတစ်ကောင် ယေရှုအတွက် မြို့အနှံ့ လျှောက်ဟောင်နေရင်၊ ငါတော့ အမဲရိုး ပစ်ကျွေးလိုက်မှာပဲ” တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ fundamentalists တွေ။ အဓိက တရားကိုင်စွဲသူတွေပါ။ အရာရာတိုင်းတော့ သဘောတူကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကတရားတွေကို သဘောတူတဲ့အတွက် ဘုရားကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းစရာပါ။ တယောက်နဲ့တယောက် ကောင်းကွက်တွေ ရှာပြောကြပါ။
ဟိုတုန်းက ကျွန်တော့သားက ကားတိုက်ခံထားရပုံပေါက်တဲ့ ခွေးကြီးတစ်ကောင် အိမ်ကိုယူလာတယ်။ တကိုယ်လုံး စက်ဆီတွေ ပေနေတယ်။ အရေပြားမှာလည်း ၂နေရာ - ၃နေရာလောက် ပေါက်ပြဲနေတယ်။ သန်းတွေကလည်း တကိုယ်လုံးခဲလို့။ ပိန်လွန်းပြီး အားကလည်း မရှိတော့ လမ်းတောင် သိပ်မလျှောက်နိုင်ဘူး။ သားတိုနီကတော့ ပွတ်သပ်ပေးနေလေရဲ့။
အဲဒီခွေးကိုမြင်တော့ “သားရေ၊ အဲဒီခွေးယူသွားကွာ။ ရောဂါလည်းရှိပုံရတယ်။ ကြောက်စရာကွာ” လို့ အော်ပြောမိတယ်။
“ဒါပေမယ့် ဖေဖေရာ၊ ကျွန်တော် ဒီခွေးကို လိုချင်တယ်”
“သား၊ မင်းမှာ အဲဒီခွေး မလိုပါဘူး။ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ကွာ။ သန်းတွေကလည်းအများကြီး”
“ဒါပေမယ့် ကြည့်ပါဦး ဖေဖေရာ၊ သူက အမြီးကလေး နန့်နေတယ်”
ကျွန်တော်ကတော့ ခွေးကို မကြိုက်တဲ့ ဆင်ခြေတွေ အများကြီးရှိနေ၊ မြင်နေပေမယ့်၊ သားက ကောင်းကွက်ကလေး မြင်နေတယ်။
တယောက်နဲ့တယောက် ကောင်းကွက်တွေ မရှာသင့်ဘူးလား? ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကတရားတွေကို ယုံကြည်ခံယူရင်၊ အပြစ်မရှာကြပါနဲ့။ ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ ။
Posted by Papa at 10:26 AM
09. The Behavior of Believers ယုံကြည်သူရဲ့ အပြုအမူ (BREAD FOR BELIEVERS)
“ထိုသို့ပြောသော်လည်း၊ ချစ်သူတို့၊ သင်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သောအရာ၊ သာ၍ကောင်းသောအရာတို့နှင့် ဆိုင်သည်ကို၊ ငါတို့သည် သဘောကျလျှက်ရှိ၏။” - ဟေဗြဲ ၆း ၉။
မကြာသေးခင်က လေ့လာမှုတွေအရ အမေရိကန်ပြည်ရဲ့ မဲပေးနိုင်သူ ၃ ယောက်တိုင်းမှာ တယောက်ဟာ အသစ် မွေးဖွားပြီးသူ born again တွေလို့ သိရပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းအရ ယုံကြည်သူတွေဟာ ဧ၀ံဂေလိတရားဟောပြီး ဝိညာဉ်ရေးအရ အားကြီးစွာနဲ့ ကမ္ဘာကို ပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သာ ခရစ်ယာန်တရားတော်ကို အလေးထားမယ် ဆိုရင်ပေါ့။
ဒီနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ ခက်တာက သာမန်ခရစ်ယာန်တွေများနေတာပါပဲ။ အဲဒီ ခရစ်ယာန်တွေဟာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ “ခရစ်ယာန်ဖြစ်တာ ကြာပြီလား” လို့မေးတဲ့အခါ “ခရစ်ယာန် ဖြစ်လိုက်၊ မဖြစ်လိုက်နဲ့ အနှစ် ၄၀ နီးပါးရှိပါပြီ။” လို့ ဖြေတဲ့သူနဲ့ တူနေတယ်။ အများစုက ဖြစ်လိုက်၊ မဖြစ်လိုက်ပါဘဲ။
Henry Drummond က ပြောတယ်။ “လောကကြီးမှာ လိုနေတာက လူ ပိုများဖို့မဟုတ်ဘူး။ ပိုကောင်းတဲ့လူတွေ ရှိလာဖို့ပါ” တဲ့။ Billy Sunday ကလည်း “အသင်းတော်မှာ လိုတာက အသင်းသားအသစ်တွေ မဟုတ်ဘူး။ အသစ်ပြုပြင်ထားတဲ့ အသင်းသားအဟောင်းတွေပါ” တဲ့။
အသင်းတော်အများစုဟာ တကယ်အသက်ရှုတဲ့ ဆဲလ်ပြွန်နည်းနည်းပဲပါတဲ့ မကျန်းမာတဲ့ အဆုပ်တခုနဲ့ တူနေတယ်။ ခရစ်ယာန်လို့ အမည်ခံသူတိုင်း ကျမ်းစာအမြင်နဲ့ကြည့်လို့ အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်နေကြရင်၊ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ ကြီးမားတဲ့ ဝိညာဉ်ရေး သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်နေမှာပါ။
အခု- ဒီတရားဒေသနာမှာ ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အချက်တွေ၊ တနည်းအားဖြင့် အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ အချက် (၇) ချက်ကို ဝေငှပါမယ်။ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ လိုတာက သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ဖို့ပါပဲ။ ယော ၃း၃၆ မှာ “သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရ၏။” အခု ဝေငှမှာက ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ရထားတဲ့ ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတာတွေပါ။
(၁) ခရစ်တော်ကို လူရှေ့ထင်ရှား ၀န်ခံပါ။ CONFESS CHRIST PUBLICLY
ပထမ - ခရစ်တော်ကို လူရှေ့ထင်ရှား ဝန်ခံဖို့လိုတယ်။ ရောမ ၁၀း၁၀ မှာ “ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ခြင်းငှါ စိတ်နှလုံးဖြင့် ယုံကြည်ရ၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ခြင်းငှါ နှုတ်ဖြင့် ဝန်ခံရ၏။” ပြီးတော့ သခင်ယေရှုက မဿဲ ၁၀း၃၂ -၃၃ မှာ “အကြင်သူသည် လူတို့ရှေ့မှာ ငါ့ကိုဝန်ခံအံ့။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသော ငါ့ခမည်းတော်ရှေ့မှာ ထိုသူကို ငါဝန်ခံမည်။ အကြင်သူသည် လူတို့ရှေ့မှာ ငါ့ကိုငြင်းပယ်အံ့၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသော ငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှာ ထိုသူကို ငါငြင်းပယ်မည်။”
လူရှေ့ဝန်ခံခြင်းဟာ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်မဟုတ်ပေမယ့် ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်။ “ခရစ်ယာန်အများစုဟာ Arctic အာတစ်မြစ်လိုပဲ ပါးစပ်ထဲမှာ ရေခဲနေကြတယ်လို့” လူတစ်ယောက်က ဆိုဖူးတယ်။ တခြားလူတွေ၊ တခြားအကြောင်းတွေအတွက် ရပ်တည်ရဲကြပေမယ့် ခရစ်တော်အတွက် ရပ်တည်ဖို့လိုလာတဲ့အခါ ယုံကြည်သူတွေဟာ ဝိညာဉ်ရေးမှာ သူရဲဘောကြောင်လာတတ်တယ်။
ယေရှုခရစ်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အားကိုးပြီးသူတိုင်းဟာ အသင်းတော် ဝတ်ပြုစည်းဝေးမှာ ရှေ့ထွက်ပြီး ယုံကြည်ကြောင်း ဝန်ခံသင့်တယ်။ ခရစ်တော်ကို အားကိုးပြီးတာကို တခြားသူတွေ သိစေချင်ကြောင်း တရားဟောဆရာကို ပြောပြသင့်တယ်။ ခရစ်တော်ကို အားကိုးပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်အတွက် ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ဝမ်းသာအားရ ပြောပြသင့်တယ်။ အဝေးက ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ မိဘတွေရှိရင်လည်း ပြောင်းလဲပြီလို့ ဖုန်းနဲ့ ပြောပြသင့်တယ်။ ကိုယ့်အလံကို ခေါက်မသိမ်းဘဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့လွှင့်တင်လိုက်ပါ။ တိတ်တဆိတ် တပည့်တော်မျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။
(၂) အသင်းတော်တစ်ပါးမှာ အသင်းသားအဖြစ် ပါဝင်ပါ။ CHURCH MEMBERSHIP IN THE LOCAL CONGREGATION IS THE NEXT STEP
ဒုတိယအဆင့်က အသင်းသားအဖြစ် ပါဝင်ဖို့ပါ။ ဒါက ခရစ်ယာန်ဖြစ်ချင်လို့ အသင်းတော်မှာ ပါဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ အသင်းသားဖြစ်တာနဲ့ ကယ်တင်ခြင်းဟာ ဆက်နွယ်နေလို့ပါ။ Billy Sunday က ပြောလေ့ရှိတယ်။ “ကားဂိုဒေါင်ထဲ ဝင်လိုက်ရုံနဲ့ ကားတစ်စီး ဖြစ်မသွားသလိုဘဲ အသင်းတော်ထဲပါဝင်ရုံနဲ့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်မသွားဘူး။” တဲ့။ အသင်းသားဖြစ်တာနဲ့ ကယ်တင်ခြင်းရတာ မဆိုင်ပေမယ့် အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့တော့ ဆိုင်ပါတယ်။ ဟေဗြဲ ၁၀း ၂၅ မှာ “လူအချို့တို့၏ ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်း၊ အချင်းချင်း စည်းဝေးခြင်းအမှုကို မရှောင်မလွှဲကြနှင့်။”
တမန် ၂း၄၁ မှာ “- ထိုစကားကို အသင့်နှလုံးသွင်းမိသော သူတို့သည် ဗတ္တိဇံကိုခံ၍၊ ထိုနေ့၌ အရေအတွက်အားဖြင့် သုံးထောင် မျှလောက်သော သူတို့သည် ဝင်ကြ၏။” ဒီကျမ်းချက်မှာ ဘုရားပေးတဲ့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ယုံကြည်၊ နှစ်ခြင်းခံ၊ ပြီးရင် အသင်းဝင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့အတွေ့အကြုံအရတော့ အသင်းတော်တစ်ပါးမှာ မပါဝင်ပဲ၊ အဲဒီအသင်းတော်အပေါ် သစ္စာမရှိပဲ၊အောင်မြင် တဲ့ ယုံကြည်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာလေ့မရှိဘူး။ ဓမ္မသစ်မှာ “အသင်းတော်” လို့ (၁၁၇) ကြိမ်ရှိတဲ့အနက် (၉၅) ကြိမ်ဟာ ဒေသတွင်းရှိ အစုအဝေးလို့ ဆိုလိုတယ်။
ဘယ်အသင်းတော်မှာ ပါရမယ်လို့ ကျမ်းစာက အတိအကျမပြောဘူး။ ဥပမာ ကျမ်းစာက “အဲဒီ.. အဲဒီ မြို့က နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှာ ပါဝင်ရမယ်လို့ မပြောဘူး။ ဒါကြောင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ လမ်းပြမှုကို မျှော်လင့်ရမယ်။ ကိုယ့်ဒေသက ကျမ်းစာယုံကြည်တဲ့ ကောင်းတဲ့ အသင်းတော်တွေကို ဘုရားကျောင်း လှည့်တက်ကြည့်ပါ။ ဘုရားသခင် ရွေးချယ်ပေးတဲ့ အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းပါ။ ဘယ်အသင်းတော်လို့ ကျမ်းစာက အတိအကျမပြောပေမယ့် ဘယ်အသင်း တော်မျိုးမှာ ပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုးတော့ ပေးပါတယ်။
ပထမအချက်အနေနဲ့ ကျမ်းစာကို ဦးထိပ်ထားတဲ့ ဖန်တယ်မင်တယ်လ်အသင်းတော် Fundamental church ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သင်းအုပ်က “အပျိုကညာမှ ဖွားမြင်ခြင်း၊ အသွေးဖြင့် တစ်ခါတည်း အပြစ်ဖြေခြင်း၊ သခင်ယေရှု ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ကျမ်းစာကို တလုံးစီအပြည့်အဝ မှုတ်သွင်းခြင်း၊ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း စတာတွေကို ယုံကြည်ရမယ်။ ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကတရားတွေကို ယုံကြည်ရုံသာမဟုတ်၊ အဲဒီ အရေးကြီး ဩဝါဒတွေအတွက် မကြောက်မရွံ့ ရပ်တည်ရဲတဲ့ သင်းအုပ်ဖြစ်ရပါမယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ မှားယွင်းတဲ့ သွန်သင်ခြင်းတွေနဲ့ သီးခြားခွဲနေတဲ့ အသင်းတော်တစ်ပါးဖြစ်ရမယ်။ ခေတ်သစ်ဘု ရားမဲ့အယူ Modernism ကို ထောက်ခံတဲ့ အသင်းတော်မှာ မပါဝင်သင့်ဘူး။ နောက်ပေါက် တရားဟောဆရာလေးတွေကို ကျမ်းစာဟာ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော် မဟုတ်ဘူးလို့ သွန်သင်တဲ့ သောကောရောကော လစ်ဘရယ်လ် Liberal ဆရာတွေကို လစာထောက်ပံ့တဲ့ အသင်းတော်မှာ မပါဝင်သင့်ဘူး။ ပါဝင်မိရင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ချက်ခြင်းနှုတ်ထွက်ပြီး ခေတ်သစ် ဘုရားမဲ့အယူ Modernism ၊ သောကောရောကောအယူ Liberalism နဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အယူတွေကို ငြင်းပယ်ပြီး၊ ယုံ ကြည်ခြင်းရဲ့ အဓိကတရားတွေကို စွဲလန်းတဲ့ အသင်းတော်တပါးမှာ ကူးပြောင်းပါဝင်သင့်ပါတယ်။
တတိယအနေနဲ့ ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းလုပ်တဲ့ အသင်းတော်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အသင်းတော်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ဝိညာဉ်တွေကို ကယ်ဖို့ပါ။ ဒါဟာအဓိကအလုပ်ပါ။ ဒီအလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့သာ တခြားအရာတွေက ပံ့ပိုးရတာပါ။ အသင်းတော်မှာ တနင်္ဂနွေ တော်တော်များများ တက်ပေမယ့် တစ်ယောက်မှ ပြောင်းလဲတာကိုမမြင်ရရင် မပါဝင်သင့်ဘူး။ သင်းအုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကယ်တင်ဖို့ စိတ်မဝင်စားရင် ပါဝင်လက်မတွဲသင့်တော့ဘူး။ အသင်းတော်မှာ အဓိကအလုပ်ဟာ ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်း Soul winning ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒီအချက်ကို အဓိကထားရင် ဒီလိုမျိုး အသင်းတော်ရှိရာအရပ်ကို မိုင်တစ်ရာ အသွားအပြန် သွားရလည်းပဲ ပါဝင်သင့်ပါတယ်။
အချက်လေးအနေနဲ့ သင်းအုပ်ဟာ ကျမ်းစာအသင်ကောင်းတဲ့ ဆရာဖြစ်သင့်တယ်။ ဘုရားကျောင်းတတ်တိုင်း ကျမ်းစာသင်ယူတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိဖို့ လိုတယ်။ ဘုရားကျောင်းတက်တာ သင်ကြားခံယူဖို့ပါ။ ဝတ်ပြုစည်းဝေးတိုင်းဟာ ဧ၀ံဂေလိသဘော ဖြစ်သင့်ပေမယ့် ဆန်းဒေးစကူး Sunday School နဲ့ ဆုတောင်းစည်းဝေးတွေမှာ ကျမ်းစာသင်ချိန် ရှိသင့်တယ်။ ဘုရားကျောင်းဆိုတာ ယုံကြည်သူတွေ သင်ကြားခံယူရာ နေရာဖြစ်တယ်။ မိတ်ဆွေဖွဲ့ရာ ဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်း ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ရာ ကမ္ဘာကို သာသနာပြုဖို့ ကူမရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားမြို့ကို ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုရင် အဲဒီမြို့က အသင်းတော်တစ်ပါးမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး အမြန်ပါဝင်သင့်တယ်။ ယုံကြည်သူတိုင်း အသင်းဝင် ဖြစ်သင့်ပြီး ပါဝင်တဲ့အသင်းတော်အပေါ် ဘုရားကျောင်းတက်ခြင်း၊ ဆုတောင်းပေးခြင်း အလှူငွေပေးခြင်းအားဖြင့် သစ္စာရှိသင့်ပါတယ်။
(၃) ကျမ်းစာ နေ့စဉ်လေ့လာဖို့ ဆက်ကပ်ပါ။ CONCENTRATE DAILY ON THE STUDY OF GOD’S WORD
အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ တတိယအဆင့်ကတော့ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော် လေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်။ ကျမ်းစာသင်ယူတာဟာ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ မဟုတ်ပေမယ့်၊ ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်။ ၁ပေ ၂း၂ မှာ “ ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာ နှုတ်ကပတ်တရား၏ နို့စစ်အားဖြင့် ကြီးပွားမည့်အကြောင်း၊ ဘွားစသောသူငယ်ကဲ့သို့၊ ထိုတရားနို့ကို အလွန်လိုချင်သော စိတ်ရှိကြလော့။” ရှင်ပေတရုက “ဘွားစကလေးတွေ နို့ဆာသလို မွေးဘွားစ ယုံကြည်သူတွေ နှုတ်ကပတ်တော် ဆာငတ်သင့်တယ်” လို့ ဆိုချင်ပုံရတယ်။ သခင်ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ချက်ချင်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆာငတ်သလားတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ သင်ကြားခံယူမှု သိပ်မရှိသေးဘူး။ ထပ်လေ့လာလေလေ ထပ်သိချင်လေလေပါ။ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် ကြီးထွားဖို့ နှုတ်ကပတ်တော် အစာစားခြင်းဟာ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးပါတယ်။
လူတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ “ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ လိုအပ်လာတဲ့အချိန်၊ လိုအပ်လာတဲ့နေရာမှာ ရင့်ကျက်တဲ့သူတွေ အလုံအလောက် မရှိခဲ့ဖူးဘူး။” လို့ ဆိုတယ်။ တရားဟောဆရာ အတွေ့အကြုံအရ ပြောရရင် “အသင်းတော် သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး မှာ ရင့်ကျက်တဲ့ ယုံကြည်သူတွေ အလုံအလောက် မရှိခဲ့ဘူး။” လို့ ဆိုချင်တယ်။ အမေရိကန်ပြည်မှာရှိတဲ့ ခရစ်ယာန်လို့ အမည်ခံတဲ့ သူတိုင်းဟာ အားကြီးရင့်ကျက်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ခဲ့ရင် ကမ္ဘာကြီးကို ဘုရားသခင်အတွက်၊ အမှန်တရားအတွက် ပုံဖေါ်နိုင်ခဲ့ကြမှာပါ။
လူဟာ စားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင် ဖတ်ရတယ်။ ဝိညာဉ်ရေးမှာလည်း စားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်သူတွေဟာ ညစ်ညမ်းစာပေနဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေကို ရှောင်ပြီး ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ထဲက အစာကောင်းတွေ စားရမယ်။ ပြီးတော့ ယုံကြည်သူဟာ “ရှက်ကြောက်စရာ အကြောင်းမရှိဘဲ” လုပ်ဆောင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကို လေ့လာဖို့ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးတယ်။ ၂တိ ၂း၁၅ မှာ “ရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘဲ၊ ဆရာသမားဖြစ်လျှက်၊ ဘုရားသခင့်ရှေ့၌ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဆက်သခြင်းငှါ ကြိုးစားအားထုတ်လော့။” ယုံကြည်သူဟာ ဝိညာဉ်ကယ်ဖို့ ကျမ်းစာဗဟုသုတ ရှိရမယ်။ ကျမ်းစာဟာ စင်ကြယ်မှုကိုလည်း ဖြစ်စေတယ်။ ယော ၁၅း၃ မှာ သခင်ယေရှုက “ သင်တို့သည် ငါဟောပြောသော စကားအားဖြင့် ယခုပင် ရှင်းလင်းလျှက်ရှိကြ၏။” ယော ၁၇း၁၇ မှာ “ကိုယ်တော်၏ သမ္မာတရားအားဖြင့် သူတို့ကို သန့်ရှင်းစေတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပါတ်သည် သမ္မာတရားဖြစ်ပါ၏။” လို့ ဆုတောင်းခဲ့တယ်။
လူတစ်ယောက်က သူ့သင်းအုပ်ကို “ကျွန်တော်ဖတ်တာ ဘာမှမမှတ်မိတော့တဲ့အခါ နှုတ်ကပတ်တော် ဆက်ဖတ်သင့် သေးသလား?” လို့ မေးတယ်။ ပညာရှိတဲ့ သင်းအုပ်ဆရာကြီးက ခဏစဉ်းစားပြီး၊ ပြန်ဖြေတယ်။ “ဟေ! မမှတ်မိရင်လည်း ဆက်ဖတ်ကွာ။ ဇကာထဲကို ရေလောင်းလိုက်တဲ့အခါ ဇကာပေါ်မှာ ရေမတင်ပေမယ့် ရေကြောင့် ဇကာတော့ သန့်သွားလိမ့်မယ်။” တဲ့။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျမ်းစာအုပ် ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာ ရေးထားတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်း အမှတ်ရမိတယ်။ “ဒီကျမ်းစာအုပ်ဟာ အပြစ်မလုပ်အောင် တားပေးလိမ့်မယ်။ အပြစ်က ဒီကျမ်းစာကို မဖတ်ချင်အောင် တားဆီးလိမ့်မယ်။” ဒီစကားဟာ တကယ်မှန်တဲ့ စကားပါ။ ကျမ်းစာဖတ်ဖို့ အချိန်တစ်ချိန်ရယ်လို့ နေ့တိုင်း သတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ D. L. Moody က ဆုတောင်းတာဟာ ဘုရားသခင်ကို စကားပြောတာပါ။ ကျမ်းစာဖတ်တာဟာ ဘုရားသခင်က လူကို ပြန်ပြောတာပါ။ နားထောင်မှုကို ပိုဦးစားပေးရမယ်။ ကျမ်းစာပုံမှန်မဖတ်ဘဲ အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန် ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။
(၄) နေ့တိုင်း ဆုတောင်းပါ။ COMMUNE DAILY WITH GOD IN PRAYER
အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ စတုထ္တအချက်ကတော့ နေစဉ် ဆုတောင်းခြင်းပါ။ “ပဌာနာတော် ” ဟာ နေ့တိုင်း ဆုတောင်းဖို့ ပေးထားတာပါ။ “အသက်မွေးလောက်သော အစာကို အကျွန်ုပ်တို့အား ယနေ့ ပေးသနားတော်မူပါ။” (မဿဲ ၆း၁၁) ဒီဆုတောင်းဟာ နောက်နေ့တွေမှာလည်း ထပ်ဆုတောင်းဖို့ ဖြစ်တယ်။ တပတ်မှ တခါပဲ ဆုတောင်းခိုင်းရင်တော့ “တပတ်စာ အစာကို ယနေ့ ပေးသနားတော်မူပါ” လို့ တောင်းခိုင်းမှာပေါ့။ လုကာ ၁၈း၁ မှာ “လူတို့သည် အားမလျော့ဘဲ ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းရမည်။” ၁သက် ၅း၁၇ မှာ “မခြားမလပ် ဆုတောင်း ပဌာနာပြုကြလော့။” ဆာလံ ၅း၃ မှာလည်း “အိုထာဝရဘုရား ၊ နံနက်အခါ အကျွန်ုပ်စကားသံကို ကြားတော်မူရပါ၏။ နံနက်အခါ ကိုယ်တော်ကို မျက်မှောက်ပြု၍ မြော်လင့်ပါမည်။”
နေ့တိုင်းဆုတောင်းသင့်တဲ့ အကြောင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပထမအချက်က ရပေါက်ရလမ်းအဖြစ် ပြင်ဆင်ပေးထားလို့ပါ။ မဿဲ ၇း၇ မှာ “တောင်းကြလော့။ တောင်းလျှင်ရလိမ့်မည်။” ယာကုပ် ၄း၂ မှာ “မရကြ။- အကြောင်းမူကား ဆုမတောင်းဘဲနေကြ၏။” နေ့တိုင်းဆုတောင်းရင် ဘာတွေရလာမယ်ဆိုတာ အံ့ဩစရာပါ။ အများကြီးတောင်းဖို့လည်း မဝံ့မရဲမဖြစ်ပါနဲ့။
နပိုလီယန်ရဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်က မယုံနိုင်လောက်တဲ့ တောင်းဆိုမှုတခု တောင်းဖူးတယ်။ တခြားစစ်သားတွေက သူ့ကိုရယ်တယ်။ “ဘယ်တော့မှရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလောက်အများကြီး တောင်းထားတာ” လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးအံ့ဩစရာပါ။ နပိုလီယန်က အဲဒီစစ်သားကို ခေါ်ပြီး၊ “မင်း အဲဒီလောက်တောင်းတာဟာ ငါ့ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်တာပဲ။ ပေးရမှာပေါ့” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားသခင်က ကြီးမားတဲ့အရာတွေကို တောင်းစေချင်တယ်။ ဆာလံ ၁း၁၀- မှာ “သင်၏ နှုတ်ကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်လော့။ ဝပြောစွာကျွေးမည်။” ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်း အများကြီးရဖူးတယ်။
၁၉၆၁ မှာ စာတိုက် အလုပ်ကထွက်တော့ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဘုရားကိုပဲ အားကိုးခဲ့တယ်။ ဆုတောင်းလို့ အဖြေတွေ အံ့ဩဖွယ် ရခဲ့တယ်။ တညမှာတော့ ဇနီးသည်နဲ့အတူ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ အကြွေးမပေးနိုင်လို့ ဝမ်းနည်းနေတယ်။ အကြွေးစာရွက်တွေကို ပေါင်းအိုးပေါ်မှာ ထပ်တင်လိုက်ပြီးတော့ လက်တင်ဆုတောင်းကြတယ်။
ဆုတောင်းလို့ တဝက်လောက်ရောက်တော့ တံခါးခေါက်သံကြောင့် ရပ်သွားရတယ်။ ညည့်သန်းခေါင် အချိန်ကြီးပါ။ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက် ငိုပြီး အိမ်ရှေ့မှာ ရပ်နေတာတွေ့ရတယ်။ ချက်လက်မှတ် တစ်စောင် ထုတ်ပေးပြီးတော့ “ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို နှိုးပြီးတော့ ဆရာတို့ကို ဒီငွေတွေ သွားပေးဖို့ ပြောပါတယ်” တဲ့။ သူတို့ထွက်သွားပြီး ၊ ချက်လက်မှတ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ လိုနေတဲ့ငွေ အရေအတွက် အတိအကျပါဘဲ။
ဆုတောင်းခြင်းဟာ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ ဆေးကြောပေးခြင်းခံရဖို့ နည်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်။ ၁ယော ၁း၈-၉ မှာ “ကိုယ်အပြစ်မရှိဟု ငါတို့သည်ဆိုလျှင်၊ ကိုယ်ကိုကိုယ် လှည့်ဖြားကြ၏။ ငါတို့၌ သစ္စာတရားမရှိ။- ကိုယ်အပြစ်တို့ကို ဖေါ်ပြ တောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့အပြစ်များကို လွှတ်၍ ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်း ပြည့်စုံတော်မူ၏။” ကျွန်တော့သဘောက ဘယ်သူကိုမှ အပြစ်မပြုစေချင်ဘူး။ ခရစ်တော်ကို လက်ခံစတုန်းကဆိုရင် ဘယ်တော့မှ အပြစ်မပြုမိတော့ဘူးရယ်လို့ ရမ်းသမ်းထင်ခဲ့မိတယ်။ အပြစ်ဘယ်တော့မှ မလုပ်တော့ဘူးလို့တောင် ဘုရားကို ဂတိပေးခဲ့မိပေမယ့် အပြစ်ကတော့ လုပ်မိတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် တောင်းပန်ရင် ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ စင်ကြယ်ခြင်း ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သား ငယ်ငယ်တုန်းက စားသောက်ခါနီး ကောင်းကြီးတောင်းခိုင်းဖူးတယ်။ သူအများကြီး တောင်းပါတယ်။ ပြီး မှ“ဘုရားသခင် ကျွန်တော့အပြစ်ရှိသမျှကို ကောင်းကြီးပေးပါ” လို့ ဆက်တောင်းတယ်။ ကျွန်တော် အသံတိတ်ရယ်ပြီးတော့ “ ဒါဟာ ခရစ်ယာန်အများစုရဲ့ သဘောထားဘဲ။” လို့ တွေးမိတယ်။ နောက်မှ အပြစ်တွေကို ကောင်းကြီးပေးဖို့ မတောင်းရဘူး။ တောင်းပန်ရင် ခွင့်လွှတ်တယ်။ ဆေးကြောပေးတယ်လို့ ရှင်းပြရတယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ ဆေးကြောပေးခြင်းအတွက် အမြဲ ဆုတောင်းသင့်တယ်။ မာတင်လုသာ Martin Luther က “ဘုရားသခင်နဲ့ လက်ငင်းစာရင်း ရှင်းပါ။” လို့ ပြောတယ်။ အပြစ်တွေ စုပုံ မနေစေချင်တဲ့ သဘောပါ။ အပြစ်လုပ်ရင် ချက်ချင်းတောင်းပန်ပါ။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ ဆေးကြောပေးခြင်းကို ရယူပါ။
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ တရားဟောဆရာတစ်ယောက် တနင်္ဂနွေမနက်၊ ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ သူ့မောင်လေးကို တွေ့မိပါတယ်။ မောင်ကလေးက အတော်ညစ်ပတ် ပေကျံနေတယ်။ တရားဟောဆရာက သူ့ကိုကြည့်ရင်း “သား! မနက်အစောကြီး ဘာလို့ဒီလောက် ညစ်ပတ်ပေကျံနေရလဲကွာ!” လို့ မေးတယ်။
အမဖြစ်သူက ဝင်ဖြေတယ်။ “အခု မနက်မှ ပေတာမဟုတ်ဘူးဆရာ။ ဒီပုံစံနဲ့ ညက အိပ်ယာဝင်ခဲ့လို့ပါ။” တဲ့။
ယုံကြည်သူတွေလည်း အပြစ်ဝန်မချဘဲ အိပ်ယာဝင်ကြတယ်။ အပြစ်တွေ စုပုံထားလို့ ခရစ်တော်နဲ့ မိဿဟာယ ပျက်ရတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဟာ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးပါတယ်။
ပညာရဖို့လည်း ဆုတောင်းရတယ်။ ယာကုပ် ၁း၅ မှာ “ပညာကိုလိုလျှင်၊ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကို ပြုတော်မမူဘဲ၊ ခပ်သိမ်းသော သူတို့အား စေတနာစိတ်နှင့် ပေးသနားတော်မူသော ဘုရားသခင်ကိုတောင်းစေ။ တောင်းလျှင် ရလိမ့်မည်။” ဘုရားသခင်က “မင်းလိုချင်သလောက် ပညာတွေ တောင်းစမ်း။ ငါ ရက်ရက်ရောရော ပေးမယ်။- တောင်းလို့ မင်းကိုမကဲ့ရဲ့ဘူး။” လို့ ပြောနေတာပါ။ ဘယ်လောက် အားရစရာကောင်းလဲ? ဆုတောင်းဖို့ တခြားအကြောင်းအရင်းတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုပြောတာတွေက နည်းနည်းပိုအရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေပါ။
(၅) ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း နေ့တိုင်း သက်သေခံပါ။ COMMUNICATE DAILY THE GOSPEL TO OTHERS
သက်သေခံခြင်းဟာ အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးပါတယ်။ သက်သေခံဖို့ မကြိုးစားဘဲ၊ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ ဘုရားသခင်က ခရစ်ယာန်တယောက် ဖြစ်စေတာ သူ့တပါးကို သက်သေခံဖို့ပါ။ ယောဟန် ၁၅း၁၆ မှာ “သင်တို့သည် ငါ့က်ို ရွေးကောက်ကြသည် မဟုတ်။ ငါသည် သင်တို့ကို ရွေးကောက်သဖြင့်၊၊ သင်တို့သည် သွား၍ တည်ကြည်သော အသီးကိုသီးမည်အကြောင်း သင်တို့ကို ငါခန့်ထား၏။”
ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ရဲ့ အသီးဟာ တခြားသူတွေ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခြင်းပဲလို့ စိတ်ထဲမှတ်ထားလိုက်ပါ။ သုတ္တံ ၁၁း၃၀ မှာ “ဖြောင့်မတ်သောသူ သီးသောအသီးသည် အသက်ပင်အသီးဖြစ်၏။ သူတပါးတို့၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ရသောသူသည်လည်း ပညာရှိဖြစ်၏။” ဒီကျမ်းချက်မှာ ခရစ်ယာန် အသီးသီးတယ်ဆိုတာ သက်သေခံတာပါပဲ။ လောကထဲက ခေါ်နှုတ်ထားတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေဟာ လောကထဲမှာ နေပေမယ့် တခြားသူတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ခေါ်ထုတ်ဖို့ အတွက် လောကထဲကို ပြန်စေလွှတ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာကို သာသနာပြုဖို့ ဘုရားရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ ယုံကြည်သူတိုင်း သက်သေခံဖို့ပါပဲ။ မဿဲ ၂၈ မှာတွေ့တဲ့ အမိန့်တော်မြတ်မှာ သက်သေခံဟောပြော၊ နှစ်ခြင်းပေး၊ ပြီးတော့သက်သေခံနည်း သင်ပေးဖို့ ဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ကို ဧ၀ံဂေလိတရား မဟောရသေးဘူး။ အကြောင်းရင်းက ဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်း မလုပ်ကြလို့ပါ။ သက်သေခံခြင်းဟာ ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ တာဝန်ပါ။
ခရီးသွားရာက ပြန်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့ယောက်င်္ကျားကို ပြောတယ်။ “ဒီနေ့ မီးရထားပေါ်မှာ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကြုံရတယ်။ လူတစ်ယောက် ကျွန်မဆီရောက်လာပြီး “ခင်ဗျားခရစ်ယာန်လား?” လို့ မေးတယ်.. တဲ့။
“နင့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးလို့ ဘာဖြစ်လို့ ပြန်မပြောလိုက်လဲ?” လို့ ယောကျာင်္းက စကား ထောက်တယ်။
“အို! သူပြောတာ ရှင်နားထောင်ရရင် အဲဒါ သူ့အလုပ်မှန်း ရှင်နားလည်သွားမယ်။” လို့ မိန်းမကပြန်ဖြေတယ်။
ယုံကြည်သူတိုင်း ဝေစာလေးတွေ ဆောင်ထားသင့်တယ်။ စကားနဲ့ သက်သေခံဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ ဝေစာလေးတော့ ပေးသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခါ ယုံကြည်သူတွေ ခရစ်တော်အကြောင်း တနေ့တယောက်နှုန်း သက်သေခံဖို့ ဆက်ကပ်ခိုင်းတယ်။ သိပ်ခက်တဲ့ အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်း၊ နေ့တိုင်းစကားပြောနေကြတာပဲ။ အလုပ်လို့ သဘောထားဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ၂ကော ၅း ၂၀ မှာ “ယုံကြည်သူဟာ ခရစ်တော်အတွက် သံတမန်တွေ” လို့ဆိုတယ်။ သက်သေခံခြင်း၊ ဝိညာဉ်ရခြင်းဟာ ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်။ ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ သက်သေခံတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျမ်းစာရဲ့ အမိန့်ကို နာခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၆) စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ အပြစ်ကိုအောင်မြင်ပါ။ CONQUER TEMPTATION AND SIN
ငယ်ရွယ်တဲ့ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်မှာ စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုတွေ၊ အပြစ်တွေ ရောမွှေခံရဘူးတယ်။ စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုတွေကို အပြစ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။ မကောင်းတဲ့အတွေးတွေ ဝင်လာရင်၊ အပြစ်လုပ်ဖို့ သွေးဆောင်ရင်၊ ခရစ်ယာန် မဟုတ်လောက်တော့ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ အဲဒီလို ကြောက်စရာ အတွေးတွေ ဝင်လာတတ်တယ်။ စာတန်က အတွေးတွေ ထည့်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ဒီအတွေးမျိုး၊ တွေးတဲ့အတွက် အပြစ်တင်ပြီး၊ စာတန်က စိတ်ဓါတ်ကျအောင် လုပ်တာပါ။
စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခံရရင် သွေးဆောင်ရာပါမှ အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုတာက လူတိုင်းခံရပါတယ်။ ၁ကော ၁၀း၁၃ မှာ “လူ၌ ဖြစ်တတ်သော စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုသာ သင်တို့သည်ခံရကြ၏။” ခရစ်ယာန်အသက်တာ အောင်မြင်ဖို့ မာရ်နတ်ကို ဆီးတားရမယ်။ သွေးဆောင်ခြင်းကို ငြင်းရမယ်။ စာတန်လာရင် သခင်ယေရှုပြောတဲ့ လုကာ ၄း၈ က “အချင်းစာတန် ငါ့နောက်သို့ ဆုတ်လော့” ကို ပြောရမယ်။
အဝတ်စားသစ်ဝယ်တဲ့ စုံစမ်းခြင်းကို မဆီးတားနိုင်တဲ့ အသက်ငယ်ငယ် တရားဟောဆရာကတော်တစ်ယောက် အကြောင်း ဖတ်ရဖူးတယ်။ ယောကျာင်္းကို ဝယ်ပဲ- ဝယ်ခိုင်းနေတယ်။ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ လူငယ်ဆရာက ပြောတယ်။ “ဒီနေ့ ဈေးဝယ်သွားလို့ စာတန်က အထည်သစ်ဝယ်ဖို့ သွေးဆောင်ရင်- အချင်းစာတန် ငါ့နောက်သို့ ဆုတ်လော့ လို့ ပြောကွာ” လို့ မှာတယ်။
ဇနီးသည်ဟာ ညပိုင်းမှာ အဝတ်သစ်တစ်စုံနဲ့ အိမ်ပြန်လာတယ်။ “ဟ! နောက်တစ်ထည်လား? စာတန်ကို ငါ့ နောက်သို့ ဆုတ်လို့ ပြောဖို့ ငါမမှာဘူးလား?” လို့ ဆရာကပြောတော့
“ဟုတ်ပါ့ ကို-ရယ်… “ဒီအင်္ကျီလှလို့ ကြည့်မိပါတယ်။ မှန်မှာကြည့်တော့ စာတန်က “ဒီအင်္ကျီမင်းဝယ်သင့်တယ်၊ မင်းနဲ့လိုက်တယ်” လို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်ရယ်၊ ကိုယ်မှာသလို ကျွန်မပြောပါတယ်။ “အချင်းစာတန် ငါ့နောက်သို့ ဆုတ်လော့” လို့ပြောတော့ စာတန်က နောက်ဖက် ရောက်သွားပြီး၊ “ဒီဘက်ကကြည့်တော့လည်း လှသားပဲ” လို့ ပြောပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်မ စုံစမ်း သွေးဆောင်ရာ ပါသွားမိတာပါ။” တဲ့။
အောင်မြင်တဲ့ခရစ်ယာန်ဟာ အပြစ်ကို အမြဲတားဆီးနေရမယ်။ အပြစ်ပြုမိတဲ့အခါ ရိုးရိုးသားသား ဝန်ခံပြီး၊ အပြစ်ကို စွန့်လွှတ်ပါ။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ ဆေးကြောခြင်းကို ရယူပါ။ ရိုးသားဖို့တော့ လိုတယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သူ့သင်းအုပ်ထံ သွားပြီး “ကျွန်မအတွက် ဆုတောင်းပေးပါဆရာ။ ကျွန်မမှာ အရမ်းဆိုးတဲ့ ကားတိုင် ထမ်းနေရတယ်။ အဲဒါ တကယ့် စုံစမ်းခြင်းပဲ။” လို့ တောင်းပန်ရှာတယ်။ “မဟုတ်တာ၊ မင်းမှာ ထမ်းစရာ ကားတိုင်မရှိဘူး။ မင်းမှာ အပြစ်ပဲရှိတယ်။ မင်းယောကျာင်္းကသာ အဲဒီဝန်ထုပ်ကြီးကို ထမ်းနေရတာ” လို့ ဖြေတယ်။
အပြစ်ကို တခြားနာမည်တပ်ပြီး မဖုံးကွယ်ပါနဲ့။ တခြားသူလုပ်တော့ အကျည်းတန်တယ်။ ကိုယ်လုပ်တော့ သတ္တိရှိတာ ဖြစ်ရော။ သူတပါးက သူ့သဘောနဲ့ သူလုပ်တော့ ခေါင်းမာတယ်။ ကိုယ်ဆိုရင်တော့ တည်ကြည်တယ်ဖြစ်ရော။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကို သဘောမကျတဲ့သူဟာ အပြစ်ရှာတတ်သူ ဖြစ်သွားပြီး၊ ကိုယ်က သူ့ကိုမကြိုက်ရင်တော့ လူ့သဘောကို ထောက်ပြတာဖြစ်ရော။ သူက အားပေး မ,စတော့ မလိုဘဲ အပိုလုပ်နေတာလို့ ပြောပြီး၊ ကိုယ် အားပေး မ,စ ရင်တော့ စကားအရာ ကျွမ်းကျင်တာ ဖြစ်သွားပြန်ရော။ သူအချိန်ဆွဲနေရင်တော့ “လိပ်” လို့ ပြောပြီး၊ ကိုယ် ကျန့်ကြာနေရင်တော့ သတိကြီးတယ်လို့ ပြောပြန်ရော။ သူမှားရင်တော့ အံ့ဩတယ်လို့ ပြောပြီး၊ ကိုယ်မှားရင်တော့ “ကြုံဖူးတာပေါ့ကွာ” လို့ ပြောပြန်ရော။
အပြစ်ကို ဘုရားမြင်သလို မြင်ကြရအောင်ပါ။ ဒီလိုမမြင်ရင် အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
(၇) ခရစ်တော်ရဲ့ အမှုတော်အတွက် ပုံမှန် ပါဝင်ကူညီပါ။ CONTRIBUTE REGULARLY TO THE CAUSE OF CHRIST
ကပ်စေးနဲတဲ့သူ၊ လောဘကြီးတဲ့သူဟာ အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန် မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကယ်တင်ခြင်းကို အလှူငွေပေးလို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကယ်တင်ခြင်းနဲ့တော့ ဆက်နွယ်နေပါတယ်။
သခင်ယေရှု ပြောတဲ့ ဥပမာတော် ၃၈ ခုထဲမှာ-၁၆ ခုဟာ ငွေကြေးအသုံးအစွဲနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ အခန်း ငယ် ၆ ခန်းတိုင်းမှာ ၁ ခန်းဟာ လူနဲ့ စည်းစိမ်ရဲ့ ဆက်နွယ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်သမျှကို သုံးစွဲပုံ မှန်-မမှန်နဲ့ ဆိုင်နေတယ်။ ၁ကော ၁၆း၂ မှာ “ ငါရောက်လာသောအခါ လှူဒါန်း၍ စုထားစရာ မရှိစေခြင်းငှါ၊ ခုနှစ်ရက်တွင် ပဌမနေ့ရက်၌ အသီး သီး ကောင်းစားသည်အတိုင်း၊ မိမိတို့ဥစ္စာ တဘို့ကို ထုတ်၍ စုထားကြလော့။” အချိန် - “သတင်းပတ်ရဲ့ ပထမနေ့။” ဘယ်သူ- “လူတိုင်း”။ ဘယ်လောက်- “ကောင်းစားသည့်အတိုင်း”။ ဘာကြောင့် - “ငါလာသောအခါ စုထားစရာ မရှိစေခြင်းငှါ၊”။ လက်တွေ့ကျင့်သုံးသင့်တာက နေ့တိုင်းရဲ့ မနက်ပိုင်း အချိန်တွေကို ဘုရားသခင်ကိုပေးပါ။ သတင်းပတ်တိုင်းမှာ ပထမနေ့။ တိုးပွားလာသမျှမှာ အဦးအသီးကို ပေးသင့်ပါတယ်။ ဘုရားအမှုတော်အတွက် ငွေကြေးဖြည့်ဆည်းတဲ့ ဘုရားရဲ့ တစ်ခုတည်းသောနည်းကတော့ ဘုရားသားသမီးများရဲ့ ပေးလှူခြင်းပါပဲ။ ယုံကြည်သူတိုင်း ပုံမှန် ပေးလေ့ပေးထ ရှိသင့်တယ်။ ဝတ်ပြု ၂၇း၃၀ မှာ “ဆယ်စုတစုသည် ထာဝရဘုရား၏ ဘဏ္ဍာတော်ဖြစ်၏။” ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်။ အနည်းဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတော့ ခရစ်တော်အတွက် ပေးလှူသင့်တယ်။ ဒါက အနည်းဆုံးနှုန်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယုံကြည်သူများစွာဟာ များများပေးလှူချင်စိတ် ရှိကောင်းသလို၊ ပေးလည် ပေးလှူထိုက်ပါတယ်။ ငွေကြေးပိုလျှံတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေဟာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရပ်မနေသင့်ဘူး။ ဘုရားက တချို့လူတွေကို ငွေရှာနိုင်စွမ်း ပိုပေးထားတယ်။ တချို့သော ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးများဟာ ငွေအများကြီး အမွေရထားတယ်။ အချို့သောသူတွေဟာ အခြေအနေ ကောင်းတွေရထားတယ်။ ဒီငွေတွေဟာ သူတို့ဘဝမှာ သုံးဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားပေးတဲ့ ငွေကို ဆုတောင်း အဖြေရှာသင့်တယ်။ ယုံကြည်သူဟာ ငွေထိန်းသာ ဖြစ်တယ်။ ပိုင်ရှင် မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားအတွက် သုံးဖို့ အပ်ထားတာပါ။
ကျွန်တော့မှာ ရှိသမျှငွေကို တစ်ပြားတစ်ချပ်ကအစ ဝိညာဉ်ကယ်ဖို့ပဲ သုံးချင်တယ်။ ယုံကြည်သူဟာ အသက်ရှင်စဉ်မှာ ပေးလှူရုံမျှ မဟုတ်ဘဲ သေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သူ့ငွေကို ဘုရားအမှုတော်အတွက် သုံးစွဲဖို့ ခရစ်ယာန်ရှေ့နေတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး သေတမ်းစာ ရေးသင့်တယ်။ ဒီကိစ္စကို ဆုတောင်းပြီး ဘုရားသခင်လမ်းပြတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ငွေအလိုဆုံးဆိုတာ ဘုရားသခင် သိပါတယ်။ ပေးလှူဖို့ လမ်းပြနိုင်ပါတယ်။
အခုပြောခဲ့တာဟာ အောင်မြင်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်လာတဲ့ အချက် (၇) ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ယုံကြည်သူရဲ့ အပြုအမူနဲ့ဆိုင်တဲ့ လမ်းညွန်မှုတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ချက် ပျက်ကွက်ခဲ့ရင် အပြစ်ရှိတယ်လို့ ဝန်ခံပြီး ဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်သလို ပြုပြင်လိုက်ပါ။ ဒါဟာ ယုံကြည်သူတိုင်း အောင်မြင်တဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ အစီအမံနဲ့ အလိုတော်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
Posted by Papa at 3:57 PM